Dr. Tint Swe's Writings: June 2016
မြန်မာစာအကြောင်းရေးတိုင်း ကိုယ့်အမြင်ကိုယ့်အသိနဲ့ ဝင်ဆွေးနွေးကြတယ်။ ဆွေးနွေးတာတော့ ကောင်းပါတယ်။ ခိုင်မာတဲ့အထောက်အထားတော့ ပေးကြစေချင်တယ်။ ကိုယ့်ဖါသာတွေးယူတာမျိုးနဲ့တော့ မသင့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်တဲ့ ခိုင်မာတာတွေကိုသာ ထောက်ပြပါတယ်။
နမူနာ (၁) အနန္တသူရိယ အမျက်ဖြေလင်္ကာမှာ သူတည်းတယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မူ၊ တယောက်သူမှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်းလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မှတ်ချက် = တစ်တွေမဟုတ်ပါ။
နမူနာ (၂) ကန်တော်မင်းကျောင်းဆရာတော် ရေးသားစီရင်တဲ့ လောကသာရပျို့မှာ ကြွက်သေတခုအရင်းပြု၍၊ ကြွယ်မှုတတ်ဆုံး၊ သေဋ္ဌေးထုံးကို၊ နှလုံးမူလျက်၊ ကြံစည်နက်ကို၊ သူ့ထက်လွန်ကဲ ကြိုးစေမင်း။ မှတ်ချက် = ကြွက်သေတစ်ခု မဟုတ်ပါ။
နမူနာ (၃) မင်းတုန်းမင်းလက်ထက်ကနေ၊ အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးခေတ်ကထုတ်သမျှ ဗမာနဲ့ မြန်မာငွေပိုက်ဆံတွေမှာ တကျပ်၊ ကျပ်တဆယ်၊ ကျပ်တရာလို့သာ ရိုက်နှိပ် ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။ မှတ်ချက် = ၁၈၇၂-၁၉၈၇ ကာလထုတ်ကနေစပြီး မြန်မာငွေပိုက်ဆံတွေမှာ တစ်ဆယ်နဲ့ တစ်ရာလုပ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
နမူနာ (၄) မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းမှာ တသွေးတသား တမိဘ၊ ခြောက်ဆယ့်တနှစ် တလနှင့် တရက်သော၊ တမျိုးဘာသာ တစိတ်တဒေသ၏၊ တသွေးတသားတည်းဟူသော၊ မည်သူတဦးတယောက် တဖွဲ့ တသင်း၏လို့သာရေးထားပါတယ်။ မှတ်ချက် = တစ်တွေမဟုတ်ပါ။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာရေးထားခဲ့တာတွေအပြင် သိပ္ပံမောင်ဝရေးခဲ့တာ၊ လူထုဦးလှရေးခဲ့တာ၊ လှသမိန်ရေးခဲ့တာ၊ မင်းသုဝဏ်ရေးခဲ့တာ၊ စတာတွေကိုလည်း သက်သေအဖြစ်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာ (၅) ပေးပါရစေ။
အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါမယ်။ (ဘာသာရေးဆွဲရေးလို့ တမျိုးတော့ မထင်စေလိုပါ။ သတ်ပုံကိုသာ ရေးတာပါ။) သြကာသကို နေ့စဉ်ရွတ်ဆိုကြမှာပါ။ စာနဲ့ရေးထားတာကို ဖတ်ဖူးကြပါသလား။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း အတွဲ (၁၅)၊ စာမျက်နှာ (၉၅) မှာ တကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ်၊ သုံးကြိမ်မြောက်အောင့့် မှတ်ချက် = တစ်တွေမဟုတ်ပါ။
အတွန့်တက်လိုသူများ ဘုရားရှိခိုးတိုင်းမှာ သတိတရားဝင်ကြစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
• ၁၉၄၇ ဇူလိုင် (၁၉) ရက်နေ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခြင်းခံကြရ၊ လုပ်ကြံသူများ = ဦးစောနှင့် အပေါင်းပါများ (အာဏာအတွက်အစွန်းရောက်ခြင်း)
• ၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကို ပဌမဆုံးသတ်ဖြတ်၊ သတ်ဖြတ်သူများ = တော်လှန်ရေးကောင်စီ (အာဏာအတွက်အစွန်းရောက်ခြင်း)
• ၁၉၆၂ ဇူလိုင် (၈) ရက်နေ့ သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦကို ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီး၊ ဖေါက်ခွဲဖျက်ဆီးသူ = တော်လှန်ရေးကောင်စီ (အာဏာအတွက်အစွန်းရောက်ခြင်း)
• ၂ဝ၁၃ ဇူလိုင် (၇) ရက်နေ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗုဒ္ဓဂယာမှာ ဗုံးတွေပေါက်ကွဲ၊ ဖေါက်ခွဲသူ = မွတ်ဆလင်အစွန်းရောက်များ (ဘာသာရေးအတွက်အစွန်းရောက်ခြင်း)
Myananthida Mya ဆရာ ခုထိ တနဲ့တစ်ကိုရှင်းပြနေရတုံးလား
Ko Naing Htun Maung ဆရာလဲ မမောနိုင်မပန်းနိုင်၊ ဆေးစာတွေနဲ့ နဘမ်းလုံးရလို့မနိုင်ရတဲ့ကြားထဲ (တ) နဲ့ (တစ်) တိုက်ပွဲကို မမေ့မလျော့ ထထတိုက်လိုက်သေးတယ်။ Smile
Tint Swe အနန္တသူရိယရေးခဲ့တာ၊ လယ်တီဆရာတော်ကြီးရေးခဲ့တာ၊ မဟာစည်ဆရာတော်ကြီးဟောကြားခဲ့တာ၊ မိုးကုပ် ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားခဲ့တာ၊ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းမှာရေးထားခဲ့တာ၊ သိပ္ပံမောင်ဝရေးခဲ့တာ၊ လူထုဦးလှရေးခဲ့တာ၊ လှသမိန်ရေးခဲ့တာ၊ မင်းသုဝဏ်ရေးခဲ့တာ၊ စတာတွေကို (မဆလ) ဥက္ကဋ္ဌကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ (တ) ကနေ (တစ်) လို့ ပြင်ပါကြောင်း ထပ်လောင်းခါခါ သက်သေတွေ ပြနေပေမယ့် တချို့က လျှာမှာ၊ တချို့က လည်ပင်းမှာ တစ်နေကြတုန်း။ တချို့ကတော့ မျိုချလိုက်ကြပြီ။ အစာတောင် ကြေနေကြပြီ။
လျှာမှာ တစ်တာလောက်တော့ ကုသလို့ရမလားလို့။ Smile!
ပုံ = ပဌမအကြိမ်ထုတ် မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်း၊ စာမျက်နှာ (က) အမှာစာ
• လွမ်းသူ့ပန်း၊ တမ်းသူ့ပန်း၊
• ပန်းနဲ့ထိုက်တဲ့၊ ဦးခိုက်ရမည့်သူတွေကိုမှန်း၊
• အာဇာနည်ဗိမ္မာန်ကို စိတ်အသန်နဲ့ အဓိဋ္ဌာန်ပြု၊
• ဗိုလ်ချုပ်တို့က ကိုလိုနီကိုရန်ပြု၊ ကျွန်တော်တို့က အာဏာရှင်ကိုအန်တု၊
• တခါတလေမှာ ပန်းခြင်း၊ တခါတလေမှာ ပန်းခွေ၊
• တခါတလေ ကလေးတွေ၊ တခါတလေ အမျှဝေ၊
• ရွှေတောင်ကြီးပြို၊ မျက်ရည်ယို အငိုအရှိုက်၊
• အမှောက်တိုက်၊ ခေါင်ခိုက်အောက်မိုက်တဲ့လူတသိုက်၊
• အခုလဲ မိုက်တဲ့သူတွေ ခေါင်ပေါ်တက်မိုက်နေ၊
• ဗိုလ်ချုပ်ကို တိုင်တည်ချင်ပေ၊ အမိုက်တွေမှန်သမျှ ကျဆုံးပါစေ။ ။
ယူရို-၂ဝ၁၆ ကွာတားဖိုင်နယ်ပွဲ ပိုလန်နဲ့ ပေါ်တူကီကန်နေကြတယ်။ ပိုလန်က တဂိုးစသွင်းထားတယ်။ ပဌမပိုင်းအပြီးမှာ တဂိုးစီ။ ပိုလန်ကို အားပေးချင်နေတယ်။ အကြောင်းရှိပါတယ်။ ဝါဆောကို နှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးလို့ ဘက်လိုက်ချင်တာပါ။ နောက်ပြီး ပေါ်တူကီတွေ သန်လျင်မှာအခြေစိုက်ပြီး မြန်မာ့အချုပ်အခြာကို ထိပါးခဲ့ဘူးတာကတချက်နဲ့ ကျွန်တော် ပိုလန်ကို ပဌမအကြိမ်ရောက်စဉ်က စာအုပ်လေးတအုပ်ရလာတာကို ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် အသုံးချနိုင်ခဲ့တဲ့အချက်တွေကြောင့် ပိုလန်ဖက်ကို လိုက်တာပါ။
ပိုလန်ကနေ ကျွန်တော်ယူလာတဲ့စာအုပ်ကို မြန်မာဘာသာပြန်ပြီးပုံနှိပ်ပြီး၊ မြန်မာပြည်ထဲကို လျို့ဝှက်နည်းတွေနဲ့ သွင်းခဲ့ပါတယ်။ စာအုပ်အမည်က ပုန်ကန်သူလေး။ အဲဒီစာအုပ်လေးဟာ တနှစ်လေးကြိမ်ထုတ်ဝေတဲ့ နယူး ဘရန်စ်ဝစ်ခ် ယူနီဘာစီတီရဲ့ ၁၉၈၆ ခုနှစ် မိုးဦးကျ ဝိရောဓိစာစောင်ထဲက The Little Conspirator ကို မြန်မာလိုဘာသာပြန်ဆိုထာပါ။ အဲဒီဆောင်းပါးကလည်း ရိုမန်၊ အမ်၊ ဘော်ရေကိုးနဲ့ အင်ဒရီရာဒေါ်တို့က မူရင်းပိုလန်ဘာသာကနေ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ပြန်ထားတာပါ။ ဘာသာပြန်အမှာမှာ ဒီလိုရေးခဲ့ပါတယ်။
အကြမ်းမဖက်ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းနေကြကုန်သော မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် အထောက်အကူပြုမည်ဟု ယူဆပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤစာအုပ်က အာဏာရှင်တွေကို ဆန့်ကျင်ဖို့ အကြမ်းမဖက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို သုံးရန် တိုက်တွန်းထားသည့်ပြင်၊ ဖတ်ပါ၊ ဖတ်ပြီးရင် လက်ဆင့်ကမ်းပါ၊ တတ်နိုင်ရင် သင့်ဖာသာသင် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပါ ဆိုတဲ့အမှာလည်းပါ ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်ပါတယ်။ စာအုပ်ပါ ဥပဒေပုဒ်မများသည် ပိုလန်ဥပဒေများသာ ဖြစ်ပါသည်။
(အင်စီဂျီယူဘီ) ရုံး၊ နယူးဒေလီ
ဝါဆောမြို့က ဒေါက်တာသန်းထိုက်နဲ့ ဂျာမဏီက ဦးနွယ်အောင်တို့ကို အထူးသတိရကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ဖဖေက အသက် ၅၆နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်ကျော်ကတည်းက နှာခေါင်းက အနံ့မရပါဘူး။ ဆေးခန်းပြတော့ နှာခေါင်းထဲမှာ အသားပို ဖြစ်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ တခါတလေနှာပိတ် နှာရည်ယို ခေါင်းမူး ဖြစ်ပါတယ် အနံ့ကတော့ လုံးဝမရပါဘူး။ အသားပိုကိုခွဲသင့်လား ခွဲရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဘာတွေဖြစ်နိုင်မလဲ။ မခွဲဘဲထားရင် အန္တရာယ်ရှိနိုင်လားသိချင်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။
၂။ ကျွန်တော့်အသက် ၃ဝ ပါဆရာ။ အိမ်ထောင်မရှိပါ။ ကျွန်တော့်နှာခေါင်းအတွင်းမှာ အသားပို (အနီရောင် အသားတုံး) ဘယ်ဖက်နှာခေါင်းမှာထွက်နေတာ နှာခေါင်းပေါက် ပိတ်လုနီးနီး ဖြစ်နေပါပြီဆရာ။ ကျွန်တော်သတိထားမိတာ (စဖြစ်တဲ့အချိန် အသားစသေးသေးလေး) လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်တုန်းကပါဆရာ။ အသားတုံးရှိတဲ့နေရာက နှာနုရဲ့ အဆုံး နှာခေါင်းရိုး အတွင်းဖက်မှာပါဆရာ။ ဒီအတိုင်းနေနေရင်တော့ မနာမကိုက်ပါဘူး။ နှာခေါင်းပေါက်ထဲ ထိုးကြည့် ထိကြည့်ရင်လဲ သိပ်မနာပါဘူးဆရာ။ ထိမှန်းသိရုံကလေးနာပါတယ်။ ဆရာ့ဘလော့ခ်ထဲမှာ အဲ့ဒီအကြောင်း (နှာခေါင်း ကင်ဆာ ဒါမှမဟုတ် ရောဂါတခုခု) အကြောင်းရေးထားတာ မတွေ့မိပါဘူးဆရာ။ ကျွန်တော်ရှာတာလဲ မနှံ့သေးတာပါ။
နှာခေါင်းအတွင်းကို ဖုံးထားတဲ့အလွှာကနေဖြစ်ဖြစ် နှာခေါင်းဘေးက လေခိုအိတ် Sinus ကဖြစ်ဖြစ် အသားပိုထွက်လာကို ခေါ်တယ်။ အသားပို တခုမကလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ တခုခုအရင်ဖြစ်ပြီးမှ ရလဒ်အဖြစ် အသားပို ထွက်လာတာပါ။ တခုခုနဲ့ မတည့်ခြင်း (အလာဂျီ)၊ ပန်းနာ၊ နာတာရှည် ထိပ်ကပ်နာ (ဆိုင်းနပ်စ်)၊ ဖန်းဂတ်စ် မှို နဲ့ ကလေးများမှာ မွေးရာပါ မျက်ရည်၊ တံတွေး၊ ချွေး၊ အစာခြေရည် စတဲ့ အရည်ထွက် (ဂလင်း) မှန်သမျှကို ထိခိုက်တဲ့ (ဆစ်စတစ်-ဖိုက်ဘရိုးဆစ်) ဖြစ်ရာကနေ ဆက်ဖြစ်တာမျိုး ပြောတာပါ။
အရွယ်အစားသေးနေတုံး ဘာမှမခံစားရသေးပါ။ စစ်ဆေးတာတောင်မှ နောက်နားကဖြစ်နေရင် မတွေ့ဘဲနေတတ်ပါတယ်။ လက္ခဏာစဖြစ်ရင်လဲ (ဆိုင်းနပ်စ်)မှာလို နှာခေါင်းပိတ်၊ နှာစေး၊ နှာချေတာတွေပါဘဲ။ မနာပါ။ နှာခေါင်းပိတ်တာ၊ နှာရည်က နှာခေါင်း နောက်ဖက်မှာ ယိုတာ၊ ခေါင်းက အုံပြီးကိုက်မယ်၊ အသက်ရှူရ ခက်လာမယ်။ အိပ်ရင် ဟောက်မယ်။ စကားသံပါ ပြောင်းလာပါမယ်။ အနံ့ကောင်းကောင်းမရလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှာခေါင်းသွေးယိုတာ နဲပါတယ်။ သိပ် ကြီးလာရင် ပါးစပ်နဲ့ဘဲ အသက်ရှူရပြီး၊ အိပ်ရတာတောင် မလွယ်တော့ဘူး။
• Antihistamines (အင်တီ-ဟစ်စ်တမင်း) ဆေး၊ ဆေးနာမည်တွေက အေတူဇက်ရှိပါတယ်။ (Diphenhydramine, Loratadine, Desloratadine, Meclizine, Quetiapine, Fexofenadine, Pheniramine, Cetirizine, Promethazine, Chlorpheniramine, levocetirizine)
• (အလာဂျီ) နဲ့ဆိုင်သူများအတွက် ပါးစပ်ကနေသောက်တာနဲ့ နှာခေါင်းထဲထည့်ရတဲ့ (ကော်တီကို-စတီရွိုက်) ဆေးတွေကို အားကိုးရမှာပါ။ အသားပိုကို တိုက်ရိုက်ဆေးထိုးနည်းကို ခွင့်မပြုပါ။ Aristocort (Triamcinolone) Tablets နဲ့ Aristocort (Triamcinolone diacetate) injection က စိတ်ချရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• (စတီရွိုက်) ဆေးမျိုးက စားဆေး၊ ရှူဆေး၊ ထိုးဆေး ဘာဖြစ်ဖြစ် တာရှည်မပေးသင့်ပါ။ ဆေးရဲ့ မကောင်းချက်က ဆီးချို၊ သွေးတိုး၊ မျက်စိရေတိမ်၊ အတွင်းတိမ်၊ အရိုးအားနည်း၊ ကလေးဆိုရင် ကြီးထွားတာကို နှေးစေမယ်။
• နှာခေါင်းကြည့်ကိရိယာနဲ့ စစ်ဆေးမယ်။ လိုအပ်ရင် တိတိကျကျသိရအောင် CT scan လုပ်ပါမယ်။ (အလာဂျီ) ကြောင့် ဖြစ်ရသူတွေကို Immunotherapy ခေါ်တဲ့ ဓါတ်ပြီးကုသမှုမျိုးလုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီနည်းက ရောဂါတခုခုဖြစ်ရင် အဲဒါကို နောင် ဖြစ်မလာအောင် ဒုတ်ပြီး၊ ဓါးပြီးလို ပြီးသွားအောင်လုပ်ပေးနည်းဖြစ်ပါတယ်။
• ဆေးနဲ့မရတော့ရင် ခွဲစိတ်ကုသနည်းလုပ်ရပါတော့မယ်။ တခုတည်းသော အသားပို၊ တခုမကပေမဲ့ သိပ်မကြီးရင်၊ Simple polypectomy နည်းက အကောင်းဆုံးပါ။ ကျန်တာတွေကိုတော့ Endoscopic sinus surgery ဒါမှမဟုတ် Functional endoscopic sinus surgery (FESS) နည်းသုံးရပါမယ်။ သေချာအောင် CT scan ကြည်ရင်းခွဲရပါတယ်။
• Homeopathic (ဟိုမီယိုပက်သစ်) ဆေး Sanguinaria က နာတာရှည်အအေးမိတာကနေ အသားပို ထွက်တာမျိုးအတွက် အစွမ်းထက်ပါတဲ့။ နောက်ဖက်နားကနေထွက်တဲ့ ခပ်ကြီးကြီး အသားပိုကို Teucrium က ကောင်းပါသတဲ့။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် Calcarea Carb ပေးရင် ထပ်ဖြစ်တာနည်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
• စိတ်ပျက်ချင်စရာတခုကတော့ အောင်မြင်တဲ့ခွဲစိတ်မှု ဖြစ်အုံးတော့ ပြန်ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ (အလာဂျီ) ဖြစ်တာ၊ မတည့်တာတွေ ဆက်ရှိနေ၊ ထပ်ဖြစ်နေလို့ ပြန်ပေါ်လာတာကြောင့် ဘာကိုရှောင်ရမလဲ သိအောင်လုပ်ပြီး ရှောင်နိုင်အောင် ရှောင်ပါလေ။
- Allergic Rhinitis အလာဂျီ နှာခေါင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/allergic-rhinitis_30.html
- Anosmia နှာခေါင်းအနံ့မရခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/anosmia.html
- Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/nasal-polyps.html
- Rhinitis နှာခေါင်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/rhinitis.html
- Sinusitis (ဆိုင်နူဆိုက်တစ်) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/sinusitis.html
မြန်မာစာအရေးအသားမှာ (တ) အစား (တစ်) လို့သာရေးလာကြရတဲ့ သမိုင်းအထောက်အထားကို နိုင်ငံရေးလုပ်ဘက် မိတ်ဆွေတဦးဆီက အခုပဲရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်တယ် ကိုရန်။ မြန်မာစာအဖွဲ့ကနေ မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာပါ။
တစ်အရေး တအရေး ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၁၇။ မြန်မာစာလုံးပေါင်းများ ပြန်လည် စိစစ်မွမ်းမံရာတွင် တစ်အရေး တအရေး ခွဲခြားသတ်မှတ်ရေးကိစ္စကိုလည်း တစ်ပါတည်း ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။
၁၈။ တစ်ဂဏန်းကိန်းပါပုဒ်များဖြစ်ပါလျက် တစ်တွင် စ မသတ်ဘဲ အလွယ်ရေးသားနေကြခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရေးတော့အမှန် ဖတ်တော့အသံဟူသော စည်းမျဉ်းဥပဒေအတိုင်း စည်းကမ်းရှိရှိ လိုက်နာရေးသားသင့်ကြောင်း မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီးက ၁၉၈၁ - ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လနှင့် သြဂုတ်လအတွင်း မြန်မာစာအဖွဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စများ ဆွေးနွေးရာတွင် လမ်းညွှန်မိန့်ကြားခဲ့ပါသည်။
၁၉။ မျက်မှောက်ခေတ် သတင်းစာ၊ စာအုပ်စာတမ်းများနှင့် ကျောင်းသုံးစာအုပ်များတွင် တစ်သင်္ချာကိန်းပါ ပုဒ်များကို တစ်ခု၊ တစ်ယောက် စသည်ဖြင့် စသတ်၍လည်းကောင်း၊ တခု၊ တယောက် စသည်ဖြင့် စသတ်ဘဲလည်းကောင်း မညီမညွတ် ရေးသားလျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့မညီမညွတ်ဖြစ်နေခြင်းကို ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ စည်းကမ်းတကျ ညီညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်အောင် ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ပေးရန် လိုအပ်လာပါသည်။
မြန်မာစာအဖွဲ့နဲ့ မြန်မာစာကော်မရှင် နာမည်တွေကို အင်္ဂလိပ်လိုကနေ ဘာသာပြန်ရလို့ သတ်ပုံလွဲကောင်းလွဲပါမယ်။ အဲဒီအဖွဲ့တွေထဲက သက်ရှိထင်ရှား ဘယ်နှစ်ဦးကျန်သေးလည်း မသိပါ။
(၁) ဦးဘညွန့်၊ အငြိမ်းစားသမိုင်းပါမောက္ခ၊
(၂) ဦးချမ်းသာ (လက်ဝဲမင်းညို)၊၊
(၃) ဦးလှဘေ (ဒဂုံလှဘေ)၊၊
(၄) ဦးဆန်းထွန်း (ဆန်းထွန်း မန်းတက္ကသိုလ်)၊
(၅) ဦးစန်းငွေ (ဒဂုံဦးစန်းငွေ)၊
(၆) ဦးသော်ဇင် (သော်ဇင်)၊
(၇) ဦးအောင်သော်၊ ညွှန်ချုပ် (ရှေးဟောင်းသုတေသန)
(၈) ဦးလှရွှေ၊ အငြိမ်းစား ပါချုပ်၊
(၉) ဦးထင်ကြီး (တက္ကသိုလ်ထင်ကြီး)၊
(၁ဝ) ဦးထင်ဖတ် (မောင်ထင်)၊
(၁၁) ဒေါ်ကြန် (မကြန်)၊
(၁) ဒေါ်မြင့်သန်း၊ (ကထိကဒေါ်မြသန်း)၊
(၂) ဒေါ်အုန်းခင်၊ အငြိမ်းစားကထိက၊
(၃) ဦးစိုးမောင် (သာဂရငစိုး)၊
(၄) ဒေါ်သန်းဆွေ (မြမဉ္စူ)၊ အငြိမ်းစားပါမောက္ခ၊
(၅) ဦးဝင်းဖေ (မြဇင်)၊
(၆) ဒေါ်ရင်ရင် (စောမုန်ညင်း)
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း ပဌမတွဲကို ၁၉၅၄ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလနဲ့ ဒုတိယတွဲကို ၁၉၅၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကို ရေးသားစီရင်ခဲ့တဲ့ပညာရှင်တွေက အနန္တသူရိယအမတ်ရေးခဲ့တဲ့ အမျက်ဖြေလင်္ကာလေးပိုဒ်ထဲမှာ သူတည်းတယောက် ကောင်းဘို့ရောက်မူ၊ တယောက်သူမှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်းလို့ ရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်တွေမဟုတ်ပါ။
မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်းကိုပြုစုခဲ့တဲ့ ပညာရှင်တွေ မှားတယ်ထင်ရင် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းလမ်းညွှန်ချက်ကို လိုက်နာခဲ့ကြရကုန်သော မြန်မာစာအဖွဲ့နောက်ကိုသာ လိုက်ပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော်က (ဤ) ကို (ကျွဲ) ဖတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သာ ယူဆပါတယ်။ (မဆလ) ခေတ်မှာ ပါတီကို လွန်ဆန်လို့မရပါ။ ပညာကအစ လွတ်လပ်မှု မရှိခဲ့ပါ။ အခုလွတ်လပ်မှု အများကြီး ရှိလာပြီ။ ပြန်လည် စိစစ်တာတွေလုပ်ကြတာ အလွန်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွဲတွေများနေသေးတယ်။
Mg Hanthar မှန်ပါတယ်ဆရာ့့ ဆရာပြောသလို တခု တယောက် နေရာမှာ တစ်ခု တစ်ယောက် ဖြစ်လာသလို ယခင်က အကို အမ နေရာမှာလည်း အစ်ကို အစ်မ ဆိုပြီးရေးကြပါတယ်။့့
Dr. Tint Swe ကျွန်တော်တို့ခေတ်က ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လိုက်မင်းသား မင်းသမီးရဲ့ သူငယ်ချင်းတို့ အိမ်စေတို့ ဒရိုင်ဘာတို့ နေရာမှာ ကုလားကပြားတွေက သရုပ်ဆောင်ရတယ်။ သူတို့ စကားပြောရင် အစ်ကို အစ်မ လို့အသံထွက်တယ်။ အပြင်မှာ အဲလိုသံထွက်ရင် ကုလားလို့ အပြောခံရတယ်။ စာကိုအဲလိုရေးရင်တော့ ပြောမနေနဲ့။ မျက်စိထဲမှာ မန္တလေးရုပ်ရှင်က ရိုက်ရင်ပါလေ့ရှိတဲ့ ကုလားခင်မောင်လေးကိုပဲ မြင်မြင်နေတယ်။ သူလုပ်ရတာက လူကြမ်း။
၁၉၇၁ ခုနှစ်ထုတ်၊ ဖူးငုံသစ်စ ကဗျာများ၊ အမှတ် (၃) အစိုးရ အမျိုးသမီးအထက်တန်းကျောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့
• ချယ်ရီပွင့်လန်း၊ မောတို့သျှန်းက၊
• တခါတခေါက်၊ အလည်ရောက်အောင်လာခဲ့ကွယ်။
သမီးဇံ (ရာမည - မော)
• သိပ္ပံ ဝိဇ္ဇာ၊
(တစ်ခါတစ်ခေါက်) မဟုတ်ပါ။ (တစ်နေ့သင်ရ) မဟုတ်ပါ။ (တစ်သက်မှတ်ကြပါ) မဟုတ်ပါ။
ကဗျာရေးတဲ့ ကျောင်းသူတွေဟာ ကလောင်နာမည်တွေအရ တိုင်းရင်းသူလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။
ရွှေဗမာတွေ၊ ရွှေဆရာတွေ၊ ရွှေဆရာကြီးတွေ၊ ရွှေစာရေးဆရာတွေ၊ ရွှေကဗျာဆရာတွေ။ ရွှေအယ်ဒီတာတွေ။ ရွှေ့့ တွေ သိကြစေချင်ပါတယ်။
Photos from Aye Aye Mon
By ဒီဗွီဘီ 28 June 2016 Print
အီးယူထဲကနေ ဗြိတိန်ခွဲထွက်မှာအတွက် အသစ်ပေါ်လာတဲ့ မီဒီယာအသုံးက Brexit (ဘရစ်ဇစ်) တဲ့။ Euroskeptics (ယူရိုစကက်ပတစ်) အသုံးသစ်လည်း ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါကို ကွန်ပျူတာကနေ အနီရောင်လိုင်းပြထားတယ်။ စာလုံးပေါင်း မမှန်ဘူးတဲ့။
မဲအကုန်ရေတွက်မပြီးခင်မှာ ပေါင်ငွေတန်ဖိုး ၉-၁ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျတယ်။ စတော့ရှယ်ယာတွေ ထိုးကျတယ်။ နေမြဲနဲ့ ခွဲရေး ကမ်ပိန်းမှာ အရေးပါတဲ့ နှစ်ဘက်လုံးက အကြောင်းပြချက်တွေ မနည်းမနော ရှိခဲ့ပါတယ်။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံခြားသား လက်ခံရေး စတာတွေ ပါတယ်။
ခွဲထွက်ရေးသမားတွေက (အီမိုရှင်း) များတယ်တဲ့။ (အင်မီဂရေးရှင်း) ကို ရှေ့တန်းတင်တယ်တဲ့။ နေမြဲဘက်က ထောက်ပြတာက ဗြိတိန်အချုပ်အခြာပါ ထိပါးလာနိုင်တယ်တဲ့။ ကွန်ဆာဗေးတစ်ပညာရှင်အသိနဲ့ ပြောတာပါ။
နောက်အကြောင်းပြချက်တခုကတော့ အီးယူဟာ စည်းမျဉ်းသစ်တွေနဲ့ ဗြိတိန်ကို လည်ပင်းညှစ်နေတယ်တဲ့။ တချို့ (ရယ်ဂူလေးရှင်း) တွေက အသေးအဖွဲလေးတွေတဲ့။ သုံးပြီးသား (တီးဘက်) ကို (ရီဆိုက်ကယ်လ်) လုပ်ရေးစည်းမျဉ်း။ (ရယ်ဂူလေးရှင်း) သစ်တွေကြောင့် ဗြိတိန်မှာ ပေါင် သန်း ၆ဝဝ အပတ်စဉ် နစ်နာရတယ်တဲ့။
နောက်တချက် (ကော်ပိုရိတ်) အကျိုးစီးပွားတွေ ဗုံးခိုကျင်းထဲ ဝင်အောင်းလာသလိုပဲတဲ့။ လက်ဝဲဆန်တဲ့ အယူအဆတွေနဲ့ ကြီးမားတဲ့ အစိုးရပုံစံတွေ ပြဋ္ဌာန်းနေတယ်တဲ့။ ရေပေါ်ဆီ ကော်ပိုရိတ်တွေကို ပိုဦးစားပေးလာတယ်တဲ့။ ဒီမိုကရေစီ မကျဘူးတဲ့။ အဲဒါက WTO, IMF, WB တွေအပေါ်သဘောထားသလို အမေရိကန်တွေနဲ့ ဆင်တူတဲ့ ဝေဖန်ချက်ပါ။
နောက်တချက် (အီးယူ) ဆိုတာ ကောင်းတဲ့ (အိုင်ဒီယာ) ပါ။ ဒါပေမယ့် (ယူရို) ကတော့ ပြဿနာပဲတဲ့။ ဗြိတိန်ဟာ ၁၉၇၃ ကတည်းက (အီးယူ) ထဲမှာ ပါနေခဲ့ပေမယ့် လူနည်းစုလိုသာ အခွင့်ရနေတာတဲ့။ ၂ဝဝ၈ က စခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ကျဆင်းမှုမှာ ဥရောပဘုံ ငွေကြေးသုံးစွဲရသူတွေက ပိုခံရတယ်တဲ့။ အလုပ်လက်မဲ့ ဂရိနဲ့ စပိန်မှာ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှိလာတယ်။ အခု အနှစ် ၂ဝ ကျော်လာလည်း အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်တုန်းပဲ။ အကြွေးဝန်ထုပ်ကြီးက တကယ်ကြီးမားတယ်။ ဥရောပဘုံငွေကြေး မသုံးတဲ့ ဗြိတိန်က ကံကောင်းတယ်။
နောက်တချက် တခြားနိုင်ငံသား ဝင်ရောက်လာမှု။ အီးယူဥပဒေအရ အီးယူအဖွဲ့ဝင် တခြားနိုင်ငံသားတွေ ခရီးသွားတာ၊ နေထိုင်တာနဲ့ အလုပ်လုပ်တာကို ခွင့်ပေးထားတယ်။ ဗြိတိန်က အဲဒီဒဏ်ကို ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးကျဆင်းချိန်ကတည်းက ခံနေရတယ်။ အီတလီ၊ အိုင်ယာလန်နဲ့ လစ်သူယေးနီးယားကနေ ဝင်လာကြတယ်။ ဘုံငွေကြေးဝင် မဟုတ်တဲ့ ပိုလန်နဲ့ ရိုမေးနီးယားက လူတွေက အလုပ်လာရှာကြတယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၃၃၃ဝဝဝ လောက် ဝင်လာခဲ့တယ်။
နောက်တချက် အီးယူကနေ အခွန်တိုက်ရိုက်ကောက်ခွင့််တော့ မရှိပါ။ ဒါပေမယ့် အီးယူ ဘတ်ဂျက်အတွက် နှစ်စဉ် ထည့်ဝင်ငွေ ပေးကြရတယ်။ အဲဒီပမာဏဟာ ၁၃ ဘီလီယံပေါင် ဖြစ်လို့ ယူကေနိုင်ငံသားတယောက်စီကို ပေါင် ၃ဝဝ ကျတယ်။ အဲဒီငွေကို ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာပဲ သုံးလိုက်ရရင်တဲ့။
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်ကတော့ ပရီမီးယားလိဂ် ဘောလုံးသင်းတွေ ကစားသမား ပြောင်းရွှေ့တာမှာ အခက်အခဲ ဖြစ်ကြမယ်တဲ့။
အီးယူထဲကနေ ဗြိတိန်တကယ်ထွက်ဖို့ရာ အချိန်ကြာပါဦးမယ်။ စကားတွေ ပြောကြရဦးမယ်။ ဈေးဆစ်ကြရဦးမယ်။ ဗြိတိန်ရဲ့ ပေါ်လစီတွေ အတော်များများကို သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလာတော့မယ်။ စီးပွားရေး၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ အနိုင်ရတာဟာ ဥပဒေ စည်းနှောင်မှု မရှိသလောက်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲလိုမရှိလို့ ပြောင်းပြန်လှန်ပြီး မထွက်ရေးသာ လုပ်ရင်တော့ နိုင်ငံရေးအရ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံတာ ဖြစ်ပါမယ်။
အီးယူ စာချုပ်ပိုဒ် ၅ဝ မှာ ထွက်နည်းအဆင့်ဆင့် ရေးထားတယ်။ တရားဝင် အကြောင်းကြား ရမယ်။ ညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ရမယ်။ ပြူတင်းပေါက် ကြားကာလ ၂ နှစ် ရှိတယ်။ ကုန်သွယ်ခွန်၊ ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ စတာတွေကို ညှိကြရလိမ့်မယ်။ စိုက်ပျိုးရေးကနေ မော်တော်ကားအထိ ပါတယ်။ အဆင်ပြေရင် ထွက်သွားတဲ့ဗြိတိန်က ဥရောပဈေးကွက် ဆက်ရနေနိုင်တယ်။ ဥပမာ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်တဲ့ နော်ဝေလို။ အဲဒါက အကောင်းဆုံး မျှော်မှန်းနိုင်တာပါ။
တိုင်းတပါးသားတွေ ဗြိတိန်ကို လာနိုင်ဖို့ မရေရာတော့ပါ။ ပိုခက်တာက ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ပေါင်း ၁ ဒသမ ၂ သန်းက တခြားအီးယူနိုင်ငံတွေမှာ သွားနေကြတယ်။ တခြား အီးယူနိုင်ငံသား ပေါင်း ၃ သန်းက ဗြိတိန်မှာ လာနေကြတယ်။ အရင်ကလို အင်္ဂလိပ် ရေလက်ကြားဖြတ်ရုံနဲ့ ကူးသန်းလို့ လွယ်မှာ မဟုတ်တော့ပါ။
နောက်သက်ရောက်မှုတခုက လက်ရှိ ဗြိတိန်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားနိုင်တယ်။ ဝန်ကြီးချုပ် ဒေးဗစ်ကင်မရွန်းက ဆန္ဒခံယူပွဲကို လုပ်ချင်သူ မဟုတ်ပါ။ ပါတီတွင်း ဖိအားအရ လုပ်ရပါတယ်။ ဗြိတိန်စီးပွားရေးကို ထိခိုက်မှာတော့ သေချာတယ်။ အခုကို စနေပြီ။ အချိန်လည်းကြာနိုင်တယ်။
ထွက်ချင်သူတွေဘက်က ထွက်လိုက်ရင် ဗြိတိန်မှာ လွတ်လပ်မှုတွေ ပိုရမယ်။ ကိုယ့်နယ်နိမိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်မယ်။ ၂ဝဝ၈ စီးပွားပျက်စဉ်က ဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေဒဏ်ကို အီးယူတခုလုံး ခံခဲ့ရတယ်။ ရေရှည်မှာ ဗြိတိန်အတွက် ကောင်းမယ်လို့ ထင်ကြတယ်။
အီးယူဆိုတာ ၁၉၅၂ ခုနှစ်ကတည်းက စခဲ့တာပါ။ ဥရောပ ကျောက်မီးသွေးနဲ့ သံမဏိကွန်မြူနတီနဲ့ စခဲ့တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေက ကမ္ဘာစစ်ကြီး ထပ်မဖြစ်ချင်ကြတာအတွက် စဉ်းစားခဲ့ကြတယ်။ အဓိက ဂျာမနီနဲ့ ပြင်သစ်။ ၁၉၆၇ မှာ ဥရောပစီးပွားရေးကွန်မြူနတီ ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၉၃ မှာ မက်စ်ထရစ်စာချုပ် ဖြစ်လာတယ်။
ကနေ့ကာလမှာတော့ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာ အခြေစိုက်ပြီး ဥရောပနိုင်ငံရေးနဲ့ စီးပွားရေး ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားကြီး လည်ပတ်နေပါတယ်။ (ရှန်ဂန်ဗီဇာ) စနစ်လည်း ကျင့်သုံးလို့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတခုအတွက် ဗီဇာကို တခြားနိုင်ငံတွေကလည်း အသိအမှတ်ပြုတယ်။ ဒါပေမယ့် (ယူအက်စ်အေ) လို (ယူနိုက်တက် စတိတ်စ် အော့ဖ် ယူရုပ်) အိပ်မက်တော့ မှန်းမရနိုင်ပါ။ လူမျိုးတိုင်းက ကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးစွဲ ကြီးကြတယ်။ ဗြိတိန်ဟာ ၁၉၇၃ မှာ အီးယူအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုထိ တခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေလို အပြည့်အစုံ သူ့ (အင်စတီကျူးရှင်း) တွေအပေါ် (အီးယူ) ပုံစံ လက်ခံမထားပါ။ ဥပမာ (ရှန်ဂန်ဗီဇာ) စနစ်။
အဆိုးဆုံးမှန်းဆချက်တခုကတော့ ဗြိတိန်ကွဲထွက်သွားမလား။ အင်္ဂလန်၊ ဝေးလ်စ်၊ စကော့တလန်နဲ့ မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် ၄ ခု ပေါင်းထားတဲ့ (ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း) ဟာ ကနေ့လို ဆက်ရှိပါဦးမလား စဉ်းစားလာကြပြီ။ ဆန္ဒခံယူပွဲမှာ စကော့တလန်သားတွေက (အီးယူ) နဲ့ ဆက်တွဲနေချင်တဲ့ဘက်က မဲပေးခဲ့ကြတယ်။ သူတို့က အင်္ဂလန်ကြီးစိုးနေတာကို မကြိုက်ကြပါ။ ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းက လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်ချင်နေကြတယ်။ အဲဒါက ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က သိထားရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလည်းပဲ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်မှာ အဲလိုအမြင်က ကျဆင်းလာတယ်လို့ ထောက်ပြချက်လည်း ရှိပါတယ်။ (အီးယူ) အနေနဲ့လည်း အချမ်းသာဆုံးအဖွဲ့ဝင်တနိုင်ငံ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာ ဖြစ်ပါမယ်။
ဒီလို ထူးခြားတုန်လှုပ်စရာ ကောင်းလှတဲ့ သတင်းနဲ့အတူ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း စဉ်းစားကြမှာ သေချာတယ်။ ခွဲထွက်ခွင့်။ စဉ်းစားကြည့်တာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မတူတာတွေက အတိုင်းထက် အလွန်များတယ်။ တချို့က ပေါင်းတောင်ပေါင်းကြရသေးတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆကြတယ်။ တချို့က ဟိုနိုင်ငံသည်နိုင်ငံ အားကိုးစိတ်ကနေ တွေးတယ်။ တချို့ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲရဖို့သာတွက်တယ်။ တချို့့။
(တ) ကို (တစ်) လုပ်ထားတဲ သတ်ပုံအလွဲတွေကို ရေးနေတာများလှပြီ။ မူရင်းအမှန်ကိုသိရလို့ ပြင်လာသူတွေအတွက် အားတက်ရတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ တယောက်ပြီးတယောက်ကို ကြိုးဝိုင်းပေါ် တင်ပေးနေပါတယ်။
မီဒီယာဖခင်တဦး လူထုဦးလှရေးခဲ့တာကို တမြန်နေ့ကတင်ပါတယ်။
မြန်မာစာလောကဆရာတဆူ လှသမိန်ရေးတာကိုလည်း မနေ့ကတင်ပါတယ်။
မြန်မာစာနဲ့ ကဗျာအရာမှာ ဆရာတဆူဖြစ်သူ မင်းသုဝဏ်ဘာသာပြန်တာကို အခုလေးတင် တင်ပါတယ်။
ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း၊ ပထမတွဲ၊ ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရား ရေးသားစီရင်တော်မူသည်
စာမျက်နှာ ၉၅ = တစ်စုံတစ်ခုသော
ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း၊ ဒုတိယတွဲ၊ ဆဋ္ဌသင်္ဂီတိပုစ္ဆအဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားရေးသားစီရင်တော်မူသည်
စာမျက်နှာ ၁ဝ၃ = တစုံတယောက်က
မူရင်းမြန်မာစာ၊ မူရင်းကဗျာ၊ မူရင်းဘာသာပြန်တွေကို တမျိုးတမည်လုပ်တာသာမက ဝိပဿနာစာအုပ်မှာပါ ဝိဝါဒကွဲစရာတွေက အလွန့်အလွန်အရုပ်ဆိုးပါတယ်။ စာအုပ်တိုက်တွေ၊ အယ်ဒီတာတွေ၊ စာပြင်ဆရာတွေမှာ တာဝန်ရှိကြပါတယ်။
သမိုင်းအချက်အလက်လေးတွေ ရေးတင်တိုင်း အငြင်းပွားစရာတွေ့တာချည်းပဲ။ ကျွန်တော်လိုလူကိုအသာထား အများလေးစာတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်ကနေရေးတာကို သမိုင်းဒေါက်တာဘွဲ့ရ တယောက်ကနေ အစိုးရပိုင်သတင်းစာမှာ ငေါ့ရေးတယ်လို့ ကွန်မင့်ရေးပေးတာတွေ့မှာပါ။
သမိုင်းဆိုတာ အထောက်အထားလိုတယ်။ အထောက်အထားဆိုတာ ဘယ်သူတွေကနေ ဘယ်တုန်းကရှာတွေ့တာလဲ။ ဘယ်စာအုပ်ထဲကလဲ။ ဘယ်ရုပ်ရှင်ထဲကလဲ။ နိုင်ငံတိုင်းနဲ့ ခေတ်တိုင်းမှာ ပေါ်လစီသမိုင်းတွေရှိတယ်။ ဆေးပညာတောင်မှ ရှိတယ်။ နာဇီခေတ်မှာ ဂျာမန်မျိုးဗီဇသုတေသနတွေထွက်ခဲ့တယ်။
စစ်အေးခေတ်မှာ လက်ဝဲ-လက်ယာ သူတို့သာတာတွေချည်း ရေးတဲ့စာတွေ၊ စပ်တဲ့ကဗျာတွေ၊ ရိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေ ပလူပျံနေအောင်ထွက်ခဲ့တယ်။ ထိုင်း-မြန်မာစစ်ကို သူ့ဖက်ကတမျိုး ကိုယ့်ဖက်ကတမျိုး စာတွေ၊ ကဗျာတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေ ရှိတာမဆန်းပါ။ သူ့အလုပ် သူလုပ်ကြတာ။
ကျွန်တော်က သမိုင်းကိုလိုအပ်တယ်လို့ယူဆပြီး၊ လေ့လာနေပါတယ်။ ဆေးပညာလိုပါပဲ သိလိုသူဖတ်ဖို့ရာ ဘလော့နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ တင်ထားတယ်။ လူမှုရေးကွန်ယက်မှာတင်တာက သာလာယံဇရပ်နံရံမှာရေးရသလိုပဲ။ မကြိုက်တဲ့သူက အောက်ကနေ သူတို့ရေးချင်တာ ရေးခြစ်သွားကြတယ်။
မျက်စိအောက်တင် မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်သိထားတာကို ပြန်ပြောလို့လည်း လက်မခံ ကက်ကက်လန်ငြင်းဆန်တာ မကြာခဏကြုံရတယ်။ မြန်မာစာသတ်ပုံကို ပုံနှိပ်စာအုပ်ပါဓါတ်ပုံရိုက်ပြလည်း အလကားပါကွာသမားတွေကမနည်းဘူး။
ကျွန်တော်ရေးတာတွေကို သိသူဖေါ်စား မသိသူကျော်သွားလို့မပြောလိုပါ။ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ညမှာ စွန့်လှူထားတဲ့ ပံသကူပစ္စည်းလို့သာ အောက်မေ့စေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်အသုံးမလိုရင် ကောက်မယူပဲ အသာထားခဲ့ပါ။ နောက်လူရှိတယ်။ တံတွေးတော့ ထွေးမထားခဲ့ပါနဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဘယ်မှာနေနေ ကျန်းမာကြပါစေ။ ဘယ်မှာနေနေ အသိပညာကုံလုံကြွယ်ဝကြပါစေ။
ယိုးဒယားနဲ့ ထိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ (စယမ်) နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာစစ် (၁၇၆၅-၁၇၆၇) ဟာ မြန်မာ့ကုန်းဘောင်မင်းဆက်နဲ့ ထိုင်း (ဘန်ဖလူလောင်) မင်းဆက်မှာ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စစ်ပွဲအဆုံးမှာ ရာစု (၄) ခုကြာရှည်ခဲ့တဲ့ (စယမ်) မင်းဆက် ပျက်သုဉ်းသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဘုရင်ဟာ တရုပ်ရဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့် ခက်ခက်ခဲခဲတိုက်ယူထားတဲ့နယ်မြေကနေ ဆုတ်ခွါခဲ့ရတယ်။ ထိုင်းမှာ ကနေ့အထိသက်တမ်းရှည်တဲ့မင်းဆက်ကို ၁၇၇ဝ ကနေစပြီး ထူထောင်လာနိုင်တယ်။
ဘုရင့်နောင်က ထိုင်းကို ၁၅၆၄-၆၉ မှာတိုက်ပြီးအနိုင်ယူခဲ့တယ်။ (စယမ်) နိုင်ငံနဲ့ မြန်မာစစ် (၁၇၆၅-၁၇၆၇) ဟာ ၁၇၅၉-၁၇၆ဝ စစ်ပွဲအဆက်ဖြစ်တယ်။ တနင်္သာရီကိုထိန်းချုပ်ရေးနဲ့ ဟံသာဝတီမွန်တွေကနေ ဗမာဘုရင်ကို ပုန်ကန်ရာမှာ ယိုဒယားဖက်ကနေ ကူညီရာကနေဖြစ်တယ်။ မြန်မာစစ်သား မြောက်ပိုင်း ၂ သောင်းနဲ့ တောင်ပိုင်းက ၂ သောင်းစီပါတယ်။ ဗမာက အယုဒ္ဓယကိုသိမ်းယူတယ်။ တချိန်တည်းမှာ တရုပ်ကလာတိုက်လာတယ်။ (စယမ်) ဘုရင်က စစ်ပြေငြိမ်းလိုတယ်။ ဗမာဘုရင်က အပြတ်လက်နက်ချခိုင်းတယ်။ ၇-၄-၁၇၆၇ မှာ အယုဒ္ဓယမြို့တော်ကို ဖျက်ဆီးတယ်။ ဗမာဖက်ကရက်စက်တယ်။
ဗမာ့ပဏ္ဍာဆက် (လန်န) ခေါ် ဇင်းမယ်က (စယမ်) အကူအညီနဲ့ ဗမာဘုရင်ကိုပုန်ကန်တော့ ၁၇၇၅ မှာ ဗမာက ထပ်တိုက်ရပြန်တယ်။ ၁၇၇၅-၁၇၇၆ နဲ့ ၁၇၈၅-၁၇၈၆ မှာ နှစ်ခါတိုက်တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ဇင်းမယ်ကို (စယမ်) က အပြီးသိမ်းယူလိုက်တယ်။
၁၇၆ဝ မှာ အလောင်းဘုရားနတ်ရွာစံတော့ တက်လာတဲ့ နောင်တော်ကြီးလက်ထက်မှာ အင်းဝနဲ့ တောင်ငူမှာ ပုန်ကန်မှုတွေရှိတယ်။ ဇင်းမယ်က ၁၇၆၁-၆၃ မှာ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပုန်ကန်တာကို (စယမ်) ကကူညီတယ်။ နောင်တော်ကြီး ၁၇၆၃ နှစ် နိုဝင်္ဘာလမှာနတ်ရွာစံတယ်။ ဆင်ဖြူရှင် တက်လာတယ်။ ၁၇၆၄ နှစ်လယ်မှာ (စယမ်) ကနေ အလောင်းဘုရားခန့်ထားခဲ့တဲ့ ထားဝယ်စားမွန်ကို အားပေးတယ်။ ဆင်ဖြူရှင်ကနေ စစ်သူကြီးမဟာနော်ရထာကို လွှတ်တယ်။ ၁၇၆၄ နိုဝင်္ဘာမှာ ထားဝယ်ကို ဗမာကပြန်ရတယ်။ ဗမာစစ်တပ် ၁၇၆၂ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ ပြန်ဆုတ်တော့ ဇင်းမယ်ကလည်းမငြိမ်ပါ။ ၁၇၆၄ မှာ ကျိုင်းတုံရှမ်းကိုလည်း သွားနှိမ်နင်းရတယ်။ ၁၇၆၅ နှစ်ဖန်းမှာ ထိုင်းနယ်စပ် (လမ်ပန်း) မှာ ဗမာကတပ်စွဲထားတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ဗမာဘုရင့်စစ်သည် စုစုပေါင်း ၅ သောင်းရှိတယ်။ ဘုရင့်နောက်နောက်မှာ ဒါအများဆုံးဖြစ်တယ်။ ဗမာ့အမြောက်တပ်မှာ ပြင်သစ် ၂ဝဝ ကကူညီနေတယ်။ (စယမ်) ဖက်ကလည်း ဆင်ဖြူရှင်ကိုခုခံဘို့ရာ စစ်ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်တယ်။ ၁၇၆၄ မှာ စစ်အင်အား ၆ သောင်းရှိလာတယ်။ ဘုရားသုံးဆူနဲ့ ကန်ချနပူရီမှာ တပ်စွဲထားတယ်။ ဗမာဖက်က စစ်သူကြီးမဟာနော်ရထာရှိတယ်။ (စယမ်) က မြောက်ဖက်မှာ ဆူခိုထိုင်းနဲ့ ဖီဆန်နူလောက်မှာ တပ်စွဲထားပြီး၊ အယုဒ္ဓယကို အခိုင်အမာပြုတယ်။ သူတို့က တရုပ်နဲ့ ဗြိတိသျှ (စစ်သင်္ဘော) ဆီကနေ အကူအညီယူတယ်။ (စယမ်) ဟာ အမြောက်လက်နက်တွေလုပ်တယ်။ တချို့အမြောက်တွေက ၉ မီတာရှည်တယ်။ ၁၇၆၇ မှာ အယုဒ္ဓယကျတော့ အမြောက်အသစ် တသောင်းသိမ်းဆည်းရတယ်။
ဗမာဖက်က စစ်သူကြီးနေမျိုးသီဟပတေ့ရဲ့ ရှမ်းဒေသမြောက်ပိုင်းမှာလုပ်လာတဲ့ စစ်ပြင်မှုကို တရုပ်ကစိုးရိမ်လာတယ်။ သူတို့နယ်လို့ယူဆထားလို့ပါ။ (ကွန်လုံ) အင်ပါယာကနေ ရှစ်ဆောင်ပနာနဲ့ ကျိုင်းတုံကို စစ်ချီခိုင်းတယ်။ ၁၇၆၅ ဒီဇင်္ဘာမှာ ဗမာစစ်တပ်က (စယမ်) က ပစ်ဆန်နူလောက်ကိုဝင်တိုက်နေတယ်။ ကျိုင်းတုံကို တရုပ်စစ်သည် ၆ ထောင် ဝင်လာတယ်။ ဗမာစစ်တပ်မှာ စစ်မျက်နှာ ၂ ခုကိုတပြိုင်တည်းရင်ဆိုင်နေရတယ်။ စစ်မျက်နှာတခုမှာက ကမ္ဘာ့အင်အား အကြီးဆုံးတရုပ်ရဲ့ ကျူးကျော်မှုကို လျှော့တွက်တဲ့ ဆင်ဖြူရှင်တွက်ကိန်း မှားသွားတယ်။
တရုပ်ကနေ ၁၇၆၇-၁၇၆၈ မှာ ထပ်ပြီးကျူးကျော်တယ်။ အယုဒ္ဓယကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖျက်ဆီးနိုင်လိုက်တဲ့ ဆင်ဖြူရှင်ဟာ ၁၆ ရာစုမှာ ဘုရင့်နောင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ မဏိပူကနေ (စယမ်) နဲ့ လာအိုအထိကျယ်ပြန့်သလောက်နီးပါး အင်ပါယာကြီးရလိုက်ပေမယ့် မတည်ငြိမ်ပါ။ တရုပ်နဲ့ပါ ရင်ဆိုင်လာရတယ်။ တရုပ်စစ်တပ်မှာ လူ ၅ သောင်းပါတယ်။ မန်ချူးစစ်သားတွေက ဦးစီးတယ်။ အင်းဝအထိဆင်းလာတယ်။ ဒီဇင်္ဘာမှာ ဆင်ဖြူ့ရှင်က သူ့တပ်တွေကို (စယမ်) ကနေ ဆုတ်ခိုင်းပြီး၊ ရှမ်းဖက်ကိုလွှတ်ရတယ်။ ဗမာတွေက တရုပ်ထောက်ပံ့ရေးလိုင်းကို ပျောက်ကျားနည်းနဲ့တိုက်တယ်။ တရုပ်တပ်တွေ ၁၇၆၈ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ အင်းဝကိုရောက်လာတော့တယ်။ ဆင်ဖြူရှင်မှာ အင်အားတသောင်းနှစ်ထောင်သာ လက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်။ (စယမ်) ကတပ်တွေပြန်ရောက်လာတော့ ဗမာ့ခုခံမှု အားပြည့်လာပြီး တရုပ်တွေကို တွန်းလှန်နိုင်တယ်။ ၁၇၆၈ မတ်လမှာ တရုပ်တပ်တွေ အထိနာပြီး ပြန်ဆုတ်ရတော့တယ်။
ဆင်ဖြူရှင်တိုက်လို့ အယုဒ္ဓယပျက်သုဉ်းသွားတော့ ယိုးယားမှာ Phitsanulok, Sawankhalok, Nakhon Si Thammarat, Phimai နဲ့ Chanthaburi နေရာ (၅) ခုမှာ ကြီးစိုးနေသူတွေ အချင်ချင်း ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ကြတယ်။ ချန်ထာဘူရီမှာ (တခ်ဆင်) ကအခြေပြုနေတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံကို ၃ နှစ်အတွင်း စည်းလုံးနိုင်ခဲ့တယ်။ ထိုင်းရာဇဝင်အရ သူကနေ အယုဒ္ဓယမှာ ဗမာကို ခံချခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ ဗမာ့သမိုင်းမှာ အဲဒီတိုက်ပွဲကိုရေးမထားပါ။ တရုပ်စစ်တပ်ကလည်း ကျိုင်းတုံ ၁၇၆၅-၁၇၆၆ မှာ ဗမာတပ်ကိုမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။
(စယမ်)-မြန်မာစစ်ပွဲဟာ မြန်မာ့ကုန်းဘောင်မင်းဆက်ရဲ့ စစ်အင်အားအကောင်းဆုံးအချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။ တရုပ်ကို ကောင်းကောင်းခုခံတိုက်ထုတ်နိုင်တာက သက်သေဖြစ်တယ်။ သမိုင်းပညာရှင် Lieberman အဆိုအရ (စယမ်) (၁၈၆၇) နဲ့ တရုပ် (၁၇၆၅-၁၇၆၀) စစ်ပွဲကြီးတွေကို တပြိုင်တည်း အချိန်လောက်မှာ အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဗမာ့စစ်အင်အားဟာ ဘုရင့်နောင်အင်ပါယာကြီးနဲ့ နောက်မှာ အံသြစရာကောင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဗမာတပ်မှာ စစ်သည်အရေအတွက် အသာစီးရလို့လည်းမဟုတ်ပါ။ စစ်အတွေ့အကြုံနဲ့ စစ်သူကြီးတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ဗမာစစ်သူကြီးတွေမှာ လူမျိုးစုမတူတာတွေကို ပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ ကုန်းဘောင်နန်းစိုက်ရာ အထက်မြန်မာပြည်တခုတည်းဆိုရင် အဲလိုအင်အားမျိုးမရနိုင်ပါ။
သမိုင်းပညာရှင် Harvey ကတော့ ဗမာတွေဟာ တိုက်ဟေ့ဆိုတာနဲ့ စိတ်ဓါတ်နဲ့တိုက်ကြတယ်။ ဘယ်သူ စစ်တိုက်ရဲသလဲကိုခေါင်းထဲထားကြတယ်။ သေရင်ယင်ကောင်တွေလို အသေခံရဲကြတယ်။ ရှေ့တန်းမှာမသေပဲ ခြေလက်ပြတ်လို့ ဒုက္ခိတဖြစ်နေနေ ဘုရင့်ဆီကကျေးဇူစကားလည်း မျှော်လင့်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရင်ကိုဖူးမျှော်ခွင့်ဆိုတာကနေ တကယ့်အရှိတရားကို ဖုံးကွယ်မသွားစေကြပါလို့ရေးတယ်။
ဗမာစစ်သူကြီးတွေဟာ သူတို့နိုင်လို့သိမ်းယူထားတဲ့ (စယမ်) စစ်သားတွေကိုပါ သိမ်းသွင်းနိုင်စွမ်းရှိကြတယ်။ အဲတာကိုကြည့်ရင် ထိုင်း-ဗမာစစ်ပွဲဟာ အုပ်စိုးသူချင်းစစ်ခင်းတာဖြစ်တယ်။ တိုင်းပြည်နှစ်ခုတိုက်ကြတာမဟုတ်ဘူး။
ဗမာစစ်တပ်ဟာ ထိုင်းဖက်ကတွက်သလို ခြောက်သွေ့ရာသီပြီးရင် ပြန်မဆိုကြပဲ ထိုင်းနယ်မြေကို မိုးတွင်းမှာ ပါဆက်ထိန်းနိုင်ခဲ့တယ်။ အယုဒ္ဓယမှာ ဗမာတွေ ၁၄ လကြာသိမ်းထားခဲ့တယ်။
(၁၉) ရာစုထဲမှာ (စယမ်) ဟာ၊ မြန်မာနဲ့ ဗီယက်နမ်တို့နဲ့အတူ အရှေ့တောင်အာရှိမှာ အင်အားကြီးဖြစ်လာတယ်။ ပဌမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် (၁၈၂၄-၁၈၂၆) ကတည်းက မြန်မာပြည်ဟာ ထိုင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါ။ စစ်ပွဲအမွေအနှစ်အဖြစ် ထိုင်းဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အားအကောင်းဆုံးစစ်တပ်ကို ထူထောင်လာနိုင်တော့တယ်။ အယုဒ္ဓမှာ နန်းမစိုက်တာ့ပါ။ တနင်္သာရီ၊ ကျိုင်းတိုင်းတုံနဲ့ လန်နကို တခါတခါ ခြိမ်းခြောက်တယ်။ ကမ္ဘောဒီးယား အနောက်ခြမ်းကိုပါ သိမ်းနိုင်တယ်။ (ဇင်းမယ်) ၁၇၇၆ နဲ့ ဗီယန်ကျင်း (၁၇၇၈)၊ ချန်ဆီယန် (၁၇၈၆)၊ လွန်ဖရာဘန်း (၁၇၉၂-၁၇၉၄) ကို သိမ်းယူနိုင်လာတယ်။ ကျိုင်းတုံနဲ့ ရှစ်ဆောင်ပနာကိုပါ (၁၈ဝ၃-၁၈ဝ၄) ခြိမ်းခြောက်သေးတယ်။
မြန်မာပြည်မှာတော့ အယုဒ္ဓယကနေယူလာတဲ့ (စယမ်) ယဉ်ကျေးမှုကို အမြစ်တွယ်လာစေတယ်။ ၁၇၈၉ မှာ (စယမ်) နဲ့ ဂျားဗားယဉ်ကျေးမှုတွေကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုတယ်။ မြဝတီမင်းကြီးဦးစက ဦးဆောင်တယ်။ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေဆီကနေအကူအညီယူတယ်။ Siamese Ramayana ရာမယန၊ Enao အီနောင်ဇာတ်တွေပေါ်လာတယ်။ မြန်မာ့ရာမယနဟာ အိန္ဒိယကနေယူတာမဟုတ်ပါ။
The country has always been called Mueang Thai by its citizens. By others, it is known by the exonym Siam (Sayam, Siem, Syâm, or Syâma). The word Siam has been identified with the Sanskrit Śyāma meaning "dark" or "brown"). The names Shan and A-hom seem to be variants of the same word. The word Śyâma is possibly not its origin, butalearned and artificial distortion.
ယောက်ျားတယောက်နေ မိန်းမတယောက်အတွက်မေးတာနဲ့ မိန်းမတယောကက်နေ ယောက်ျားတယောက်အတွက် မေးတာတွေလာတိုင်း သိပ်အဆင်မပြေလှပါ။ လင်မယား၊ သမီးရည်းစားကတမျိုး။ သူများလင်ယောက်ျားဖြစ်နေတာကို တခြားမိန်းကလေးတယောက်ကမေးတာလည်း အဆင်မပြေလှပါ။ မေးတဲ့သူက သူ့ကိုယ်သူ ယောက်ျားလို့၊ မိန်းမလို့ မိတ်ဆက်တာရှိသလို ဖေ့စ်ဘွတ်နာမည်က ယောက်ျား-မိန်းမ မသိနိုင်တာရှိတယ်။ နာမည်ကို တမင်လွဲပြီး လုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်။
ဆရာခင်ဗျား ဆရာကတော့ ကိုယ်စားမေးပေးတာ မနှက်သက်ဘူးဆိုပေသိ အစအဆုံးဖြစ်စဉ်ကို သိနေလို့ ကိ်ုယ်စား မေးပေးရခြင်းပါ။ ဆရာမနှစ်သက်ရင် ကြိုတင်တောင်းပန်ပါတယ်။ ဖြစ်တာက မိန်းကလေး ပါဆရာ။ အတူတူနေပြီး အရေးပေါ်ဆေးသုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီဆေးသုံးပြီး ရက်သတ္တပါတ် ၁ပါတ်ခွဲလောက်နေတော့ ဓမ္မတာလာပါတယ်ဆရာ ပုံမှန် ပမာဏပါဆရာ။ နောက်တစ်လမှာတော့ ဓမ္မတာလာခါနီး သာမန် အအေးမိဖျားပါတယ်။ အဖျားပျောက်အောင် ဆေးထိုးဆေးသောက်လည်းလုပ်ပါတယ်။ ဖျားနေတုန်းမှာ ဓမ္မတာလာပါတယ်ဆရာ ရက်ကလည်း အနီးစပ်ဆုံးမှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ ရက်လောက်ပဲ လာပြီးရပ်သွားပါတယ်ဆရာ။ အဖျားကတော့ ဆက်ဖျားနေတုန်းပဲဆရာ။ ဓမ္မတာရပ်သွားပြီး၂ရက်လောက်နေမှပျောက်ပါတယ်။ အခု လက်ရှိအချိန်မှာ တစ်လပြည့်တော့မှာပါ နောက်ဆုံး ဓမ္မတာလာခဲ့တဲ့ရက်နဲ့တွက်ရင်။ ဒါပေမယ့် ဓမ္မတာမလာသေးပါဘူးဆရာ။ ကြားထဲမှာလည်း ကောင်လေးနဲ့ အတူတူမနေတော့တာ ပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့ ဓမ္မတာမလာခင်ကတည်းကပါဆရာ။ အဲ့တာ သူက ကိုယ်ဝန်လို့ သံသယရှိနေပါတယ်ဆရာ။ ဆီးစစ်တဲ့ကိရိယာနဲ့လည်းမစစ်ဆေးကြည့်သေးပါဘူး။
• Dr. တင့်ဆွေ
ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက်က ၂၀ပါ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လက ကျွန်မချစ်သူနဲ့အတူတူနေခဲ့ပါတယ်။ အတူနေပြီး အရေးပေါ် တားဆေးလည်းသုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလက အတူနေပြီး ၁ပါတ်ခွဲလောက်နေတော့ ရာသီလာပါတယ်။ ကြားထဲမှာ ကျွန်မအအေးမိပြီးဖျားပါတယ် ဆေးထိုးဆေးသောက်လုပ်ရပါတယ်။ ဖျားနေတုန်းမှာ ရာသီလာပါတယ်ဆရာ။
နှစ်ရက်ကျော်လေးပါ။ နည်းလဲနည်းပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် ဒီနေ့ထိဆိုရင် ရာသီလာတာ တစ်လပြည့်ခါန်ီးနေပါပြီ။
နှစ်ရက်ထဲရာသီလာပြီးနောက်ကြားထဲမှာ နှစ်ခါဖျားပါသေးတယ်။ ခုထိရာသီမလာသေးလို့ ကိုယ်ဝန်ရှိနိုင်သလား စိတ်ပူနေပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လက အတူတူနေတာနောက်ဆုံးပါပဲ။ အဲ့ဒီနောက် တစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဖြစ်ပါဘူး။ ဖြေပေးပါဦးဆရာရှင့်။
အတူနေပြီးနောက် သွေးဆင်းရင် အတူနေခဲ့တာကနေ ကိုယ်ဝန်မရစေပါ။ သေချာလိုရင် ဆီးစစ်ပါ။
ဖျားလို့ ဆေးထိုးဆေးသောက်တာက ရာသီနောက်ကျတဲ့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသလား။
ဘာဆေးမှန်း မသိ။ ပြောမရ။
ရာသီနောက်ကျတဲ့ ဖြစ်စဉ်က ကျန်းမာရေးထိခိုက်သလားဆရာ။
အခုလိုရာသီနောက်ကျတဲ့ဖြစ်စဉ်က ဆေးခန်းပြသင့်သလားဆရာ အခုလက်ရှိ ရင်သားကခဲနေသလိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ပါတ်လောက်က အဖြူဆင်းပါတယ်ဆရာ။ အဲ့ဒီဟာကရော ဘာကြောင့်လဲဆရာ။
ကနေ့မနက် ခုထိ ကော်ဖီမသောက်ရသေးပါ။
အိပ်ယာထထချင်းဆိုတော့ ဂွတ်တမောနင်းပေါ့။ ဒါပေမယ့် မဂွတ်တာတွေနဲ့ အရင်ဆုံး နပမ်းလုံးရတယ်။
စာမဖတ်သူလား၊ ကြော်ငြာဆေးမှ ကြော်ငြာဆေးပဲစွဲလမ်းသူလားတော့မသိရသူ -
• Ma Yu ဆရာရှင့်fillyMorအကြောင်းလေးရှင်းပြပေးပါ၊ အမျိုးသမီးရောဂါတွေ တကယ်ရော ဒီဆေးသောက်ရုံနဲ့ရပါ့မလား
• Tint Swe အဲဒီအကြောင်းကိုရေးနေရတာ အလွန်ကိုမောလှပြီ။ ကြော်ငြာဆေးပါဆို မေးနေကြတာပဲ။ အဲလိုရေးပေါင်းကလည်း များလှပြီ။
အရပ်ဆေးဆရာလား မသိရသူ -
• R Zar Ni ဘယဆေးဆိုင်မှာပျဉ်စကာနီသီးလို့ပြောဝယ်ပြီးကျောက်ပျဉ်ပေါ်မှာသွေးပြီးလိမ်းပါ လိမ်းထားတဲ့နေရာကစစ်စစ်နဲ့ ကိုက်လာယင်အနာနဲ့ဆေးတွေ့တာကြောင့်ပျောက်ပါ၏ သွေးစုနာ ပေါင်ခြံတွင်ပေါက်တဲ့ဘင်နာ အနာစိမ်းတို့ကို သက်သါပျောက်ကင်း၏
• Tint Swe အဲလို အရပ်နည်း ကိုယ်ပိုင်နည်းတွေကို ကိုယ့်နေရာမှာသာတင်ပါလို့ ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ ခဏနေရင် ကွန်မင့်ကိုဖျက်ပါမယ်။ အရင်က အဲလို ခဏခဏရေးထားပြီးဖြစ်လို့ပါ။ ဆောရီး။
မင်းရှင်းလုပ်ပြီး ပို့စ်တင်သူကို စိတ်ရှုတ်စေသူများ (ပို့စ်ကို တခွန်းမှမပြောပဲ ပို့စ်တင်သူ မသိတာတွေရေးသားသူ) များ -
• Kyi Zaw Lwin Myat Hsuhsumon
• Ayelay Ayelay thank mama
• Si Thu Aung Ei Phoung
• Htay Htay Lwin Myint Lwin
• Thet Thet Yin Myint Daw ShwePoent
• Thinzar Koko Khin Thandar Kyaw
• Naw Wai Mu Phaw Min Naimg Min Naing
• Mary Decem Kyaw Michael
• Aye Mon Aung Nwe Sandy Win
• Asako Htoo Sis Aye Mon Aung....:)
• Aye Mon Aung thank you sis lay .. Asako Htoo <3
• Cherry Ko IrfanIrfan
• Phyuhnin Ei Khinmar Aye
• Wint Zar Chi Soe Myint Tun
• Soe Myint Tun Nay Yi
• Wint Zar Chi သမီး အစ်မကို Mention ခေါ် မျဘူး
• Soe Myint Tun ဖြစ်တတ်ပါတယ်... ကိတ်စနမရှိ...
• Khai Boh Emily Lam
• Phyuhnin Ei Tawlaywa Chitthu
• Nu Nu Win Pyay Thu Thidar Htun Thabyay Hlaing
အကြိမ်တထောင်လောက်ရေးနေရတဲ့ မေးနည်းစည်းကမ်းကို မသိသေးသူများ -
• Htet Htet Wint Aung CA125 high ဖြစ်နေရင် cyst ကကင်ဆာဖြစ်နိုင်လားဆရာ
• ရဲ လင်း ဗိုလ် ဆရာ ကျနော့်အဖေက ကျို့ထိုးရင် တော်တော်နဲ့မပျောက်တော့ဘူး ခင်ဗျ။ အသက်ကတော့ ၇၅ နှစ်ပါ။ အခုထိ ခံစားနေရလို့ပါ ခင်ဗျာ။ ဘယ်လိုကုသရင် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဖြေကြားပေးပါ ခင်ဗျာ။
• Zin Min ဆရာ သီးတာကရော ဆရာ
• Thi Da Sun Pee ဆရာကျမဗိုက်အောက်တာကြာပြီဘာလုပ်ရင်ကောင်းလဲဆက်လောက်ပြောပြပေးပါအုန်းရှင်
• Oh Tay မေးနည်းစည်းကမ်း သိချင်လို့ပါ ဆရာ
• Wai Phyo ဆရာ တခုလောက်မေးပါရစေ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အချိန် ပါရာစီတမော သောက်လို့မရဘူးလို့ကြားဖူးပါတယ်ဆရာ ဟုတ်မဟုတ်သိချင်လို့ပါ။
• Romeuo Romeuo ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးကကိုဝန်၆လပါ ချောင်းတွေတအားဆိုးတယ်ဆရာ အစားလဲမစားချင်ဘူဆရာ ပေါင်လဲ၁၀၅ကမတက်ဘူဆရာ အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်သင့်လဲဆရာ
• Wai Phyo ကိုဝန်ရှိခါစမာ (လမင်းတံဆိပ် )အားဆေးသောက်လို့ရမလားSir
• Khin Kyi Win ဆရာရှင့် ကလေးချင်းပိတ်တယ်တယ် ဆိုတာလေးရှင်းပြပေးပါ သားဦးတုန်းကချင်းပိတ်လို့ဆိုပြီး ခွဲမွေးလိုက်ရပါတယ် နောက်တယောက်ယူရင် အဲလိုထပ်မဖြစ်အောင် ဘာတွေရှောင်သင့် လုပ်သင့် ဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါရှင်
• Khin Lay ဆရာရှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အနေနဲ့ဒီစက်သုံးတာဘာဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသလဲရှင့် OG က သုံးလို့ပိုအဆင်ပြေတယ် ပြောပါတယ် Khin Lay Fetal Dopplerပါ
• Ei Lay ဆရာရေသောက်ရေအန် အစာစားအစာအန် အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်ဆရာ ဘာဆေးသောက်ရင်သက်သာနိုင်ပါသလဲဆရာ
• Door Die ဆရာ စားပြီးတိုင် ရင်ပြည့်ပြီး အန်တာက ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆရာ
• Khaing Su Wai သားဦး ကိုယ်ဝန် မှာ ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်လို့ နောက်၁ယောက်ယူရင် ရော အဆင်ပြေမလားဆိုတာ သိပါရစေ ဆရာ သွေး က ၁၉၀ ထိ တိုးခဲ့ပါတယ်။
ဘာမှန်းမသိလို့ ပြန်မေးထားတာ ၂၄ နာရီကျော်တဲ့အထိ ပြန်မရေးလာသူ -
• Hein Hein ဟုတ်လာ
• Tint Swe ?
အများမြင်သာရာမှာ မရေးအပ်တဲ့ မေးခွန်းများ -
• Khin Khin ဆရာ နားနဲ့မနာဖဝါးနဲ့နာပါ ကျွန်မရင်သားမှာ နို့ရည်တော့မဟုတ်ဘူး ဖြူဖြူပျစ်ပျစ်နဲ့ အဲဒါဘာလဲ သိချင်လို့ပါ တခါတလေမှာ နို့သီးခေါင်းကအရမ်းနုနေပြီး ထိရင်နာတယ် ကင်ဆာလက္ခဏာဟုတ်မဟုတ် သိချင်ပါတယ် thank you ပါဆရာ
• Šein Ŝi Śi ကျေးဇူးပါပဲ ဆရာကြီး သမီးတောင် ရင်သားကြီးချင်လို့ ၀ယ်သောက်မလား စဉ်းစားနေတာပါ
• Nan Thidar Cho မေးနည်းစည်းကမ်းပို့ပေး
• Thet Htar မေးနည်းစည်းကမ်းရှိပါတယ်
• Thida Aye ဆရာရဲ့cbမှာမေးသမီး
Aung Phyo ဆရာ p57 Hoodia ဆေးအကြောင်းလေးသိချင်ပါတယ်။ ဝယ်သောက်သင့်မသင့် လမ်းညွန်ပေးပါခင်ဗျ။
ကျွန်တော့်ဆီလာတဲ့မေးခွန်းတွေက အဖေါ်နဲ့လာလေ့ရှိတာ ခဏခဏထုတ်ပြောပါတယ်။ မနက်က FillyMor သမားနဲ့ ရန်ဖြစ်ရမလား အောက်မေ့ရတယ်။
P57 Hoodia မေးခွန်းကို အခုပဲဖတ်ရပါတယ်။ မေးတဲ့သူ အသက်-ကျား-မ မသိရပါ။ ဘာဖြစ်နေလို့ အဲဒီဆေးကို သောက်ချင်သလည်း မသိပါ။ ဆေးကြော်ငြာပုံအရ ဗိုက်အဆီချဖို့လို့ ထင်ရပါတယ်။ ရေးထားပြီးသားမရှိလို့ ရှာပါတယ်။ တွေ့ပါတယ်။
အမေရိကန် FDA ကနေ သတိပေးချက်တခုကို ၁၈-၁ဝ-၂ဝ၁၁ နေ့ကထုတ်ထားပါတယ်။ P57 Hoodia ထဲမှာ ဘာတွေပါတယ်လို့ အတိအကျထုတ်ဖေါ်ပြထားချက်မရှိပါတဲ့။ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအရ အဲဒီဆေးထဲမှာ Sibutramine ပါတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒီဆေးကို မရောင်းဖို့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကတည်းက ပိတ်ပင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ စားသုံးသူတွေအနေနဲ့ ဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုသင့်ပါ။ တွေ့ရှိရင် အကြောင်းကြားပါတဲ့။
Public Notification: “P57 Hoodia” Contains Undeclared Drug Ingredient
P57 Hoodia[October 18, 2011] The Food and Drug Administration (FDA) is advising consumers not to purchase or use “P57 Hoodia,”aproduct for weight loss sold on various websites and in some retail stores, and manufactured by Huikng Pharmaceutical.
FDA laboratory analysis confirmed that “P57 Hoodia” contains sibutramine. Sibutramine isacontrolled substance that was removed from the U.S. market in October 2010 for safety reasons. The product posesathreat to consumers because sibutramine is known to substantially increase blood pressure and/or pulse rate in some patients and may presentasignificant risk for patients withahistory of coronary artery disease, congestive heart failure, arrhythmias, or stroke. This product may also interact in life threatening ways with other medicationsaconsumer may be taking.
ဒေလီမှာနေခဲ့တုံးက ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်နေတဲ့ မြန်မာရဟန်းတော်တွေကနေ စာသင်ဘက် ဗီယက်နမ်က သီလရှင်တပါးကို ခေါ်လာပြီးရောဂါပြပါတယ်။ ဆေးစစ်ချက်တွေအရ ရောဂါနာမည်က GERD ဖြစ်နေတယ်။
Acid reflux or Acid regurgitation အက်စစ်ရည်အထက်ဆန်ခြင်းလို့လဲ ခေါ်တယ်။ အစာအိမ်ထဲက အစာခြေအရည် ဆိုတာက (အက်စစ်) ဖြစ်လို့ပါ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် ပါးစပ်မှာ အဲဒီအရသာကို သိလာစေတယ်။ ဒါကို အစာမြိုပြွန်က မခံနိုင်ဘူး။ လောင်သလို ဖြစ်စေတယ်။ ပူလောင်သလို ခံစားရတာကို Heartburn လို့ခေါ်တယ်။ တခါတလက အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တပါတ်မှာ နှစ်ခါထက်ပိုဖြစ်တာ ရောဂါ။ အရွယ်သိပ်မရွေးဘူး။ ငယ်သူတွေဖြစ်ရင် ရင်ပူတာ သိပ်မခံစားရတတ်ဘူး။ ပန်းနာလိုလို ချောင်းဆိုးတယ်၊ အမြိုရခက်တာမျိုးလဲ ခံစားရမယ်။
ဘာလို့ဖြစ်လဲ သိပ်မသိသေးဘူး။ တချို့မှာ Hiatal hernia အစာအိမ်ထိပ်ပိုင်းက အစာမြိုပြွန်ဝင်တဲ့နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေး ဘေးကနေ အထက်ဘက် ကျွံတက်လာတဲ့ရောဂါနဲ့ တွဲနေတတ်တယ်။ ဖြစ်လာတိုင်း ဆေးကုစရာထူးမလိုပါ။ ကျွံတာက သွေးမလျှောက်သလို ပိတ်တာဆိုရင်တော့ ခွဲစိတ်ကုသရမယ်။
နာတာရှည်ဖြစ်နေ၊ ဆေးလဲ သေခြာမကုရင် နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာမယ်။ Esophagitis အစာမြိုပြွန်ရောင်တာ၊ သွေးယိုတာနဲ့ အနာဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်။ အမာရွတ်ဖြစ်ပြီး ကျဉ်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အနေအစားဆင်ခြင်ရင် အသက်မတိုပါ။
သီလရှင်ဆရာလေးက အသားမစားတဲ့ပြင် သွေးအားကလဲနည်းနေတယ်။ အစားအသောက်ညွှန်ရတာ ခက်တယ်။ သူများတိုင်းပြည်မှာ ပညာသင်ရသူတိုင်းတွေ့ရတတ်တဲ့ အခက်အခဲတွေရှိကြတယ်။ ပြည်ပမှာပညာသင်ကြသူတွေ ကျန်းမာရေးကောင်းကြပါစေ။
ဆဲဗင်းဒေးနေ့စဉ်သတင်းစာနှင့် တပ်မတော်အရာရှိများကြေညာချက်ထဲမှာ့့ သတင်းတစ်ပုဒ်၊ တစ်ရပ်ရပ်၊ တစ်စုံတစ်ယောာက်လို့ ရေးထားတာကို ဖတ်ရတယ်။ အမှုတော့ တစ်မနေလောက်ကောင်းပါရဲ့။
မီဒီယာဖခင်တွေထဲက တဦး (တစ်ဦးမဟုတ်) ဖြစ်တဲ့ လူထုဦးလှလိုပဲ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။
တချက်လွှတ် (တစ်ချက်လွှတ်မဟုတ်) အမိန့်တော်ပြန်တမ်းကို ကျူးလွန်ခြင်းမှ ကင်းလွတ်လိမ့်ကြလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း။
မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျွန်တော်အမေက အသက် ( ၅၉ ) နှစ်ပါ။ ဒေါပုံမြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့မှာနေပါတယ်။ အမေက နေ့တိုင်း ရင်ပြည့် ရင်ကယ်ဖြစ်ပြီး ရင်ခေါင်တောင့်ပါတယ်။ လေက အပေါ်ကိုဆန်တက်ပါတယ်။ တဂေ့ဂေ့နဲ့ပါ။ အောက်ကို လေမလည်ဘူး။ အစာစားပြီးတော့လည်း ရင်ခေါင် တောင့်ပြီး နေမရထိုင်မရဖြစ်ပါတယ်။ အစားစာပြီတော့ အန်တော့ မအန်ပါဘူး။ မိုးအေးတဲ့ချိန်မှာ ရင်ခေါင်နှင့်ကျောတွေ အောင့်တတ်ပါတယ်။ ညဘက်တွေမှာ အိပ်မရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းပြတော့လည်း ခဏပဲသက်သာပါတယ်။ အမေငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အစားအိမ်အောင့်တတ်ပါတယ်။
ကျွှန်တော်ဘယ် လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြုပြီး ပြောပြပေးပါဆရာ။ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့်။
Acid reflux or Acid regurgitation လို့လဲ ခေါ်တယ်။ အစာအိမ်ထဲက အစာခြေအရည်ဆိုတာက (အက်စစ်) ဖြစ်လို့ပါ။ အဲလိုဖြစ်လာရင် ပါးစပ်မှာ အဲဒီအရသာကို သိလာစေတယ်။ ဒါကို အစာမြိုပြွန်က မခံနိုင်ဘူး။ လောင်သလို ဖြစ်စေတယ်။ ပူလောင်သလို ခံစားရတာကို Heartburn လို့ခေါ်တယ်။ တလတခါက အကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့ တပါတ်မှာ နှစ်ခါထက်ပိုဖြစ်တာ ရောဂါ။ အရွယ်သိပ်မရွေးဘူး။ ငယ်သူတွေဖြစ်ရင် ရင်ပူတာသိပ်မခံစားရတတ်ဘူး။ ပန်းနာလိုလို ချောင်းဆိုးတယ်၊ အမြိုရခက်တာမျိုးလဲ ခံစားရမယ်။
• Upper endoscopy ကရိယာထည့်ကြည်တာက ပိုသေချာတယ်။ တခါထဲ Biopsy အသားစ ဖြတ်ယူ စစ်ဆေးတာလဲ လုပ်နိုင်တယ်။
၁။ နေတာ-စားတာ ပြောင်းရပါမယ်။ ဝနေရင် လျှော့ပါ၊ ဆေးလိပ်သောက်ရင် လျှော့ပါ-ဖြတ်ပါ။ အချဉ်၊ ချော့ကလက်၊ ကော်ဖီ၊ အရက်၊ အဆီများတဲ့အစာ၊ ချင်း၊ ကြက်သွန်၊ အစပ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ စတာတွေနဲ့လဲ ပိုဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။ ချောင်းဆိုးတာ၊ အန်တာ၊ အလေးအပင်မတာမျိုးတွေကနေ အစာအိမ်ကျွံတာ ဖြစ်လာစေနိုင်တယ်။ အဝလွန်တာ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာတွေကနေလဲ စေ့ဆော်နိုင်တယ်။
တချို့အစားအသောက်တွေကနေလဲ ဖြစ်စေနိုင်တာသတိထားရှောင်ကျဉ်ပါ။ အနေအထိုင်ကြောင့်လဲ ဆိုးစေတတ်တယ်။ တချို့မှာ မတ်မတ်ရပ်နေရင် သက်သာတယ်။ ချောကလက်၊ အဆီများတဲ့ အစားအစာ၊ စပ်တာ၊ ကြော်တာ၊ ကော်ဖီ တွေကနေ ပိုဆိုးတတ်တယ်။ အချဉ်ရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေကနေလဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ တခါစားရင် နည်းနည်းခြင်း စားသင့်တယ်။ ညစာစားပြီး ၂-၃ နာရီနေမှအိပ်-လှဲသင့်တယ်။ အိပ်ယာ-ကုတင်ကို ခေါင်းရင်းက မြှင့်ပေးထားတာ သက်သာတယ်။ ခေါင်းအုံးမြှင့်ရတာ မဟုတ်ပါ။
• Proton pump inhibitors ဆေးအမျိုးအစားလဲ သုံးတယ်။ Omeprazole (Prilosec, Zegerid), Lansoprazole (Prevacid), Pantoprazole (Protonix), Rabeprazole (Aciphex), Esomeprazole (Nexium) ဆေးတွေကတော့ လက္ခဏာတွေ သက်သာစေတယ်။ အနာလဲ ကျက်စေတယ်။ Omeprazole 20 အစာမစားခင်၊ တနေ့ ၁ ကြိမ်။
• Prokinetics ဆေးတွေကတော့ အစာအိမ်ထဲက အစာတွေကို မြန်မြန် အောက်ဆင်းစေတယ်။ Bethanechol (Urecholine) နဲ့ Metoclopramide (Reglan) တွေဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆေးတွေက အားယုတ်သလို ခံစားရမယ်၊ အိပ်ချင်မယ်၊ စိတ်ကျတတ်တယ်၊ စိုးရိမ်စိတ် ဝင်တတ်တယ်။
နာတာရှည်ဖြစ်နေ၊ ဆေးလဲ သေချာမကုရင် နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာမယ်။ Esophagitis အစာမြိုပြွန်ရောင်တာ၊ သွေးယိုတာနဲ့ အနာဖြစ်တာတွေဖြစ်တယ်။ အမာရွတ်ဖြစ်ပြီး ကျဉ်းတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ အနေအစားဆင်ခြင်ရင် အသက်မတိုပါ။
သမိုင်းအကြောင်းရေးတာကို လူတွေအများကြီးကနေ ဖတ်ရှုပြီး မှတ်ချက်တွေပါပေးကြလို့ အားတက်ရပါတယ်။ သမိုင်းယူလို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမကောင်းလှတာတွေဖတ်ရတယ်။ သမိုင်းသာသာရပ်ကို ဝိဇ္ဇာဘွဲရဖို့နဲ့ အလုပ်ရဖို့သာမဟုတ်ပါ၊ တသက်လုံးသုံးရမှာပါ။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကို ရောက်လာကြသူတွေက သက်တမ်းအရ နိုင်ငံသားလျှောက်ထားသူတွေက စာမေးပွဲ ဖြေကြရပါတယ်။
Civics Questions and Answers for the Naturalization Test လို့ခေါ်ပါတယ်။
AMERICAN GOVERNMENT အမေရိကန်အစိုးရအကြောင်း မေးခွန်း ၁ မှ ၅၇ အထိ = ၅၇ ခု၊
AMERICAN HISTORY အမေရိကန်သမိုင်း မေးခွန်း ၅၈ မှ ၈၇ အထိ = ၃ဝ ခု
INTEGRATED CIVICS ပထဝီစတဲ့ မေးခွန်း ၈၈ ကနေ ၁ဝဝ အထိ = ၂၃ စုစုပေါင်း မေးခွန်း (၁ဝဝ) ရှိတယ်။
သမိုင်းမေးခွန်းတွေထဲမှာ ကိုလိုနီတွေရောက်လာပုံ၊ ကျွန်စနစ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ တိုင်းပြည်ဖခင်၊ ကမ္ဘာစစ်စတာတွေ ပါတယ်။ မေးခွန်းနဲ့အဖြေတွေကို အစိုးရတခါပြောင်းတခါ မပြင်ပါ။
ကျွန်တော် နယူးဒေလီမှာနေစဉ်က လူငယ်ကျောင်းသားတွေကို ပညာသင်ဆုအတွက် အင်တာဗျူးမေးရတတ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေထွက်လာတာမကြာသေးတဲ့ ကျောင်းသားတယောက်ကိုမေးပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ ဘယ်ကိုလိုနီ လက်အောက်ကနေ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သလည်းဆိုတော့ တရုပ်တဲ့။
သမိုင်းဟာ စာမေးပွဲတခုတည်းအတွက်မဟုတ်ပါ။ အလုပ်အကိုင်ရဖို့သာမဟုတ်ပါ။ တသက်လုံးသာမက သားစဉ်မြေးဆက် အသုံးပြုကြရမယ့် အသိပညာကောင်းတရပ်ဖြစ်ကြောင်းပါ။ သမိုင်းကို အစိုးရကမရေးရပါ။
ပုံပါသတင်းကို အခုပဲတွေ့ရလို့ အံ့သြတုန်လှုပ်မိပါတယ်။ သမိုင်းမေဂျာနဲ့အောင်ခဲ့တဲ့ဇနီးကိုပြောတော့ သူ့ဆရာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းကို အမှတ်ရမိတယ်တဲ့။ သမိုင်းသင်တာက မ,အအောင်လို့ပြောခဲ့တဲ့ဆရာ။ အခု သမိုင်းကို မသင်ကြတော့တာက အ,ချင်လို့မဟုတ်မှန်းသိပါတယ်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကို စဉ်းစားကြရတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပညာရေးဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရ သင်ပေးနိုင်ရင်ကောင်းတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ (၉) တန်းအထိသာ သမိုင်းသင်ခဲ့ရပါတယ်။ သိနေအောင်တော့ ဆက်လုပ်နေရတုန်းပဲ။
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖြစ်ထွန်းမှုတွေ နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ သမိုင်းမတင်မီကတည်းက မြစ်ကြီးတွေနဲ့ တောင်ကြားလွင်ပြင်တွေမှာ လူတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။ အိမ်နီးချင်း တရုပ်နဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ ကူးလူး ဆက်ဆံခဲ့ကြတယ်။ သီရိလင်္ကာကုန်သင်္ဘောတွေရောက်တယ်။ တခြားဒေသတွေကနေ မလေးကျွန်းဆွယ်ကြား ခရီးတထောက်နားရာအရပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အိန္ဒိယတိုက်ကနေ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ တရားစီရင်ရေး၊ အနုပညာ၊ လက်မှုပညာတွေ၊ အယူအဆတွေရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုလွှမ်းတာ မသိသာပဲ ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းထားနိုင်တာက တခြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေထက် ထူးခြားတယ်။ ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်းကျောက်နဲ့ သစ်သားလက်ရာတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းမှာသာတွေ့ရလို့ (အညာသား) ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရနဲ့ ဆက်စပ်နေတယ်။ ၁၉၆၉ မှာတွေ့ရှိချက်အရ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာ အစောဆုံး နှစ် ၁၁ဝဝဝ ရှိတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ ကျောက်ခေတ်က ဥရောပ ကျောက်ခေတ်နဲ့ စင်ပြိုင်ရှိနေခဲ့တယ်။ ဘီစီ ၁၅ဝဝ လောက်မှာ ကြေးခေတ် ရှိခဲ့တယ်။ စပါးစိုက်ပျိုးလာကြတယ်။ မွေးမြူရေးလုပ်လာတြယ်။ ဘီစီ ၅ဝဝ လောက်မှာ သံခေတ်ရှိလာတယ်။
ဘီစီ ၁ ကနေ ၉ ရာစုအထိ။ တိဘက်တို-ဘာမင်း ဘာသာစကားပြောကြတယ်။ သရေခေတ္တရာ + ဟန်လင်းကြီး။ ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းက မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိုဖြတ်တဲ့ တရုပ်-အိန္ဒိယလမ်း အနောက်ဖက်မှာရှိတယ်။ ပျူနိုင်ငံက ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်း မြောက်ဖက်စွန်းမှာရှိတယ်။ မြို့ပြနိုင်ငံတွေတည်ထောင်တယ်။ ပျူလူမျိုးဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အစောဆုံးလူမျိုးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ တရုပ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ ကူးသန်းဆက်ဆံကြတယ်။ ၄ ရာစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ စတင်လာခဲ့တယ်။ ကနေ့ ပြည်မြို့တောင်ဖက်မှာ တည်ခဲ့တဲ့ သရေခေတ္တရာ မြို့ပြနိုင်ငံက အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ တရုပ်သမိုင်းအရ ပျူမြို့ပြနိုင်ငံပေါင်း ၁၈ ခုထိရှိတယ်။
ပျူခေတ်ယဉ်ကျေးမှုမှာ အိန္ဒိယယဉ်ကျေးမှုကနေလွှမ်းမိုးခဲ့တယ်လို့ သမိုင်းကဆိုပါတယ်။ ပင်လယ်ရေလမ်း ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးကြောင့်ဖြစ်မယ်။ တောင်ပိုင်းကမြို့နာမည်တွေကပါဠိ (သို့) သင်္သကရိုက် (သက္ကတဘာသာ) (ဆန်းစ်ခရစ်) နဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုထောက်ပြတယ်။ ဥပမာ သရေခေတ္တရာ (သီရိခေတ္တရာ) ။ တကောင်းကတော့ မြန်မာလိုဖြစ်ပြီး ဘုရားလောင်းလို သကျသာကီဝင်ကနေဆင်းသက်တယ်လို့မှတ်ယူတာလည်းရှိတယ်။ ၄ ရာစုကတည်းကစတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ တရုပ်သမိုင်းမှာလည်း ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။
၉ ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ မြင်းစီမြန်သူလို့တင်စားတဲ့ လူမျိုးတွေ မြောက်ဖက်ကနေဝင်လာတယ်။ ဗမာလို့ခေါ်တယ်။ ၉ ရာစု အစောပိုင်းကတည်းက ယူနန် Nanzhao Kingdom နန်ဇောင် (နန်ချောင်) ဘုရင်တွေနဲ့ ပျူတွေစစ်ခင်းနေကြတယ်။ ၈၃၂ မှာ နန်ဇောင်း ဘုရင်က ဟန်လင်းကြီးကို ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ ပျူ ၃ဝဝဝ ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ ပျူတချို့က ပုဂံဒေသမှာ အခြေချကြတယ်။ ပျူတွေဟာ ပုဂံသားတွေနဲ့သွေးနှောသွားတော့တယ်။ ၁၂ ရာစုအထိ ပျူစာပေ ကျန်နေသေးတယ်။ ပုဂံသားတွေဆိုတာ ဗမာတွေရော၊ ပျူတွေရော၊ မွန်တွေပါရောနှောနေတယ်။
မွန်စကားကို (အော်စထိုအေရှားတစ်) လို့ခေါ်တယ်။ ကမ္ဘောဒီယားမှာသုံးတဲ့ ခမာနဲ့နီးစပ်တယ်။ သထုံမှာဗဟိုပြုတယ်။ ၄-၆ ရာစု အိန္ဒိယ (ဂုပတား) မင်းဆက်နဲ့ခေတ်ပြိုင်ဖြစ်တယ်။ ဒိအရင် ၃ ရာစု မောရီယအင်ပါယာ အာသောကဘုရင်ကနေ ဗုဒ္ခဘာသာရဟန်းတော်တွေ စေလွှတ်ခဲ့တယ်။ သထုံကို သုဝဏ္ဏဘုမ္မိလို့ခေါ်တယ်။ မွန်ရွှေခေတ်ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ ဆက်ဆံပေမယ့် မွန်ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းထားနိုင်ကြတယ်။
မွန်ဘုရင့်နိုင်ငံတွေက ၆ ရာစုကတည်းကစတယ်။ ထိုင်းမွန်ကနေလာတယ်။ ၉ ရာစုမှာ မွန်နိုင်ငံ ၂ ခု၊ ပဲခူးနဲ့ သထုံမှာ တည်ထောင်တယ်။ ထေရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်တဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ကြွယ်ဝကြတယ်။ သထုံကို သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ရွှေနိုင်ငံတော်လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့တယ်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်အရ ရခိုင်ဒေသမှာ ဘီစီ ၃၃၂၅ ကတည်းက လူတွေနေခဲ့ကြတယ်။ တိဘက်တို-ဗာမင်း အမျိုးကများတယ်။ ၁ဝ ရာစုမှာရောက်လာကြတယ်။ ဘုရင့်နိုင်ငံတွေများတယ်။ ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းကနေ နေဂရေအငူထိ ကျယ်တယ်။ ဓညဝတီ၊ ဝေသာလီ၊ လေးမြို၊ မြောက်ဦးနဲ့ ၁၇၈၄ ဗမာဘုရင်သိမ်းပိုက်ခြင်းလို့ ၇ ပိုင်းခွဲပြီး လေ့လာတယ်။ ၁၈၂၆ ကစပြီး ၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အထိ အင်္ဂလိပ်အုပ်စိုးတယ်။
ကနေ့ကာလမှာ ရှမ်းစကားပြောသူတွေ အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ကနေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ လာအို၊ ဗီယက်နမ်နဲ့ တရုပ်ပြည်ထဲမှာ နေထိုင်ကြတယ်။ ရှမ်း (စိုင်ယမ်) ဟာ မြန်မာ (ဗမာ) ထက် ထိုင်းနဲ့ လာအိုတို့နဲ့ ပိုပြီး ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်။ (တိုင်) လို့ခေါ်တယ်။ အစဉ်အဆက် စော်ဘွားတွေကနေ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်။ ရှမ်းသမိုင်းဟာ များပြားရှုတ်ထွေးတယ်။
• ပုဂံအစောပိုင်းကာလ (၁ဝ၄၄ မတိုင်မီ)
• ပုဂံအင်ပါယာ (၁ဝ၄၄-၁၂၈၇)
ပုဂံကို ၈၄၉ မှာထူထောင်တယ်။ ဗမာလူမျိုးတွေ ခေါင်းထောင်လာနိုင်ခြင်းလို့ ရာဇဝင်မှာ အခန်းတခုအနေနဲ့ရေးတယ်။ တိဘက်တို-ဘာမင်းနွယ်တွေ ဖြစ်တယ်။ ဗမာစကားပြောတယ်။ ဧရာဝတီဘေးက ပုဂံကိုဗဟိုပြုတယ်။ ၉ ရာစု အလယ်ကစပြီး အင်အားကြီးနိုင်ငံအဖြစ် ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ ၈ ကနေ ၉ ရာစု တရုပ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ နန်ချောင်မင်းဆက်စိုးစံနေတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှကိုချဲ့ထွင်တယ်။ ၈၆၁ မှာ ဟနွိုင်းကိုသိမ်းတယ်။ မွန်နဲ့ ခမာကိုလည်း သိမ်းတယ်။ ပျူမြို့တော် ဟန်လင်းကြီးသိမ်းတယ်။
ထေရဝါဒဗုဒ္ခဘာသာ အိန္ဒိယကနေကွယ်ပြီ။ ဟင်ဒူတွေပြန်ပြီးလွှမ်းမိုးလာတယ် ကနေ့အထိဖြစ်တယ်။ ၁ဝ၄၄ ကစပြီး အနော်ရထာမင်းက ပုဂံကိုစုစည်းနိုင်လာတယ်။ ၁၈၈၆ အင်္ဂလိပ်သိမ်းတဲ့အထိ မြန်မာပြည်ဟာ တက်လိုက်ကျလိုက်ရှိတယ်။ အနော်ရထာက ရှမ်းတွေနဲ့မိတ်ဆွေလိုဆက်ဆံတယ်။ စီးပွါးရေးတောင့်တင်းအောင် ရေသွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ပေးတယ်။ ထေရဝါဒဗုဒ္ခဘာသာ ယူသွင်းလိုက်တယ်။ ကနေ့အထိ ရှင်သန်ထွန်းကားတယ်။ ၁ဝ၅၇ မှာ သထုံကိုပါသိမ်းတယ်။ ကျန်စစ်သား (၁ဝ၈၄-၁၁၁၂) နဲ့ အလောင်းစည်သူမင်း (၁၁၁၂-၁၁၆၇) တွေဟာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးကြတယ်။ မွန်ပညာသည်တွေကြောင့် အနုလက်မှုပညာတွေရတယ်။ စေတီပုထိုးတွေ ၄ဝဝဝ လောက်တည်ထားကိုးကွယ်တယ်။ ရဟန်းတော်တွေများပြားလို့ တိုင်းပြည်ရဲ့အင်အားစုတခုဖြစ်လာတယ်။ တချိန်တည်းမှာ အင်အားဆုတ်ယုတ်မှုလည်း ဖြစ်တယ်။ ၁၃ ရာစုအကုန်မှာ ပုဂံအင်အားကျဆင်းလာတော့တယ်။ မွန်ဂိုတွေ ခြိမ်းခြောက်လာတယ်။ ၁၂၅ဝ မှာ ကူဗလခန်ရဲ့ မွန်ဂိုတပ်က ဖျက်ဆီးတာခံလိုက်ရတယ်။
• အင်းဝ (၁၃၆၄-၁၅၅၅)
• ဟံသာဝတီ ပဲခူး (၁၂၈၇-၁၅၃၉၊ ၁၅၅ဝ-၁၅၅၂)
• ရှမ်းပြည်များ (၁၂၈၇-၁၅၆၃)
• ရခိုင် (၁၂၈၇-၁၇၈၅) လောင်းကြက်မင်းဆက် (ပုဂံမှကင်းလွတ်) ၊ ၁၄၂၉ မှာ မြောက်ဦး (၁၇ ရာစုအထိ) တည်ထောင်ခြင်း၊ အရှေ့ဘင်္ဂလားသည် ၁၄၅၉-၁၆၆၆ အထိ မြောက်ဦးအောက်မှာရှိခဲ့သည်။
• မွန်-မြန်မာ နှစ် ၄ဝ စစ် (၁၃၈၅-၁၄၂၄) (ဒီအသုံးကို ချစ်ကြည်ရေးပျက်စေတယ်လို့ ထောက်ပြတာလည်းရှိတယ်။)
• ပထမတောင်ငူအင်ပါယာ (၁၅၁ဝ-၁၅၉၉)
• ညောင်ရမ်းပြန်လည်စုစည်းခြင်း (၁၅၉၉-၁၇၅၂)
• မြန်မာပြည်တွင်းစစ် (၁၇၄ဝ-၁၇၇၅)
ပထမတောင်ငူအင်ပါယာ (၁၅၁ဝ-၁၅၉၉) နဲ့ ဒုတိယတောင်ငူအင်ပါယာ (ညောင်ရမ်း) ၁၅၉၉-၁၇၅၂) အထိ ရှည်တယ်။ တောင်ငူမင်းဆက်မှာ တပင်ရွှေထီးနဲ့ ဘုရင့်နောင်တို့က နာမည်ကြီးတယ်။ ၁၂၈၇ ကတည်းက ပျက်သုဉ်းသွားတဲ့ ပုဂံ အင်ပါယာကို ပြန်ပြီးစုစည်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ညောင်ရမ်းနဲ့ အနောက်ဖက်လွန်မင်းတွေက ပြန်လည် စုစည်းခဲ့တာယ်။ တောင်ငူအင်ပါယာရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကာလမှာ မဏိပူ၊ တရုပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့ ရှမ်းဒေသ၊ (ဆိုင်ယမ်) ခေါ် ထိုင်းနဲ့ (လန်ဇန်း) ခေါ် လာအိုတို့လည်းပါတယ်။
ဘုရင့်နောင်နတ်ရွာစံပြီး ၁၈ နှစ်အကြာ၊ ၂၆၆ နှစ်တာရှည်ခဲ့တဲ့၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောင်ငူ အင်ပါယာကြီး ပျက်စီးသွားတော့တယ်။
• ထိုင်းနဲ့စစ်ဖြစ်ပွါးခြင်း (၁၇၈၅-၁၇၈၆၊ ၁၇၈၇၊ ၁၇၉၂၊ ၁၈ဝ၃-၁၈ဝ၈၊ ၁၈ဝ၉-၁၈၁၂၊ ၁၈၄၉-၁၈၅၅)
• အနောက်နိုင်ငံများက ကျူးကျော်ခံရခြင်း၊
အလောင်းဘုရား (၁၇၅၂-၁၇၆ဝ) ကနေ ပဲခူးကို တိုက်ထုတ်လိုက်တယ်။ ရှမ်းပြည်ကိုလည်းပြန်ယူနိုင်တယ်။ ၁၇၅၉ မှာ မဏိပူကိုပြန်ယူတယ်။ တနင်္သာရီကိုတိုက်ယူတယ်။ ထိုင်းကိုတိုက်တာအ့ပန်မှာ သူကိုယ်တိုင်နတ်ရွာစံတယ်။ သားတော် ဆင်ဖြူရှင် (၁၇၆၃-၇၆) နန်းတက်တယ်။ အယုဒယကို ၁၇၆၆ မှာနိုင်တယ်။ တရုပ်ကလည်း ၁၇၆၆ ကနေ ၁၇၆၉ အထိ ကျူးကျော်ပေမယ့် မအောင်မြင်ပါ။ ရခိုင်ကိုရော မဏိပူရနဲ့ အာသန်ကိုပါပြန်ယူနိုင်တယ်။ အိန္ဒိယမှာအုပ်စိုးနေတဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ နယ်ချင်းထိစပ်လာပြီး ၁၈၂၄-၂၆ မှာ ပထမ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်ဖြစ်တယ်။ အာသန်၊ မဏိပူ၊ ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီကို လက်လွှတ်ရတယ်။
ဒုတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် (၁၈၅၂) ကတော့ ပဲခူးရိုးမသသစ်တွေလိုချင်တဲ့ အင်္ဂလိပ်ကရန်စလို့ဖြစ်ရတယ်။ မြန်မာပြည် အောက်ပိုင်းတခုလုံး သိမ်းယူတယ်။ ၁၈၈၅ မှာ တတိယစစ်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့နောက်ဆုံးမင်း သီပေါ (၁၈၇၈-၈၅) ကို ဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ တတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ်က ၂ ပတ်သာကြာလိုက်ပါတယ်။ ၁၈၈၅ နိုဝင်္ဘာလမှာ ဗြိတိသျှတွေက မန္တလေးနန်မြို့တော်ကို သိမ်းယူလိုက်တယ်။
• ပထမအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် (၁၈၂၄-၁၈၂၆)
• ဒုတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် (၅-၄-၁၈၅၂ မှ ၂ဝ-၁၂-၁၈၅၂)
• တတိယအင်္ဂလိပ်-မြန်မာစစ် (၇ မှ ၂၉ နိုဝင်္ဘာ ၁၈၈၅)
• ဂျပန်ခေတ် (၁၉၄၂-၁၉၄၅)
အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ် တက်ကြွလာတယ်။ ၁၉ဝ၆ မှာ YMBA ဗုဒ္ခဘာသာ ကလျာဏယူဝအသင်းတွေ ပေါ်လာတယ်။ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး မဟုတ်သေးပါ။ ၁၉၂ဝ ရန်ကုန်ကောလိပ်ကို တက္ကသိုလ်အဆင့်မြှင့်ဖို့ တက္ကသိုလ်အက်ဥပဒေ လုပ်လာတယ်။ မြန်မာစစ်စစ်တွေကို ဘေးဖယ်ထာတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်။ ကျောင်းသားတွေဆန္ဒပြကြတယ်။ ပြင်ပေးရတယ်။ YMBA ကနေကျောင်းတွေထူထောင်တယ်။ အမျိုးသားကျောင်းတွေလို့ တွင်လာတယ်။
၁၉၃၉ မှာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာတယ်။ အောင်ဆန်းက အကူအညီရှာဖို့ တရုပ်ပြည်ထွက်သွားတယ်။ ဂျပန်နဲ့တွေ့ပြီး ရဲဘော်သုံးကျိတ် စစ်ပညာသွားသင်ကြတယ်။ ၁၉၄၁ ဒီဇင်္ဘာမှာ ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်ကိုရောက်ပြီး ဗမာ့လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (ဘီအိုင်အေ) ကို ဖွဲ့လိုက်တယ်။ အင်္ဂလိပ်ဆုတ်ခွါပြီး ဂျပန်မြန်မာပြည်ကိုအူပ်စိုးတယ်။ ၁၉၃၇ အခြေခံ ဥပဒေအရ ဒေါက်တာဘမော်အစိုးရ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်။ သခင်နုရော သခင်အောင်ဆန်းပါအစိုးရထဲမှာပါတယ်။ ၁၉၄၃ မှာ ဂျပန်က မြန်မာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးပေးတယ်လို့ကြေညာတယ်။ အောင်ဆန်းဟာ မဟာမိတ်တပ် အရှေ့တောင်အာရှ စစ်ဦးစီးချုပ် မောင့်ဘက်တန်နဲ့ လျို့ဝှက်ဆက်သွယ်တယ်။ ၁၉၄၅ မတ်လမှာ အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်ပေါင်းပြီး ဂျပန်ကိုတော်လှန်တယ်။ သူ့တပ်ကို ဗမာကာကွယ်ရေးတပ်လို့ နာမည်ပြောင်းရတယ်။ စစ်တွင်းမှာပဲ ဖဆပလကို ဖွဲ့ထားတယ်။ ၁၉၄၅ မေလမှာ ဂျပန်တွေဆုတ်ခွါပြီး၊ အင်္ဂလိပ်တွေပြန်ဝင်လာတယ်။
၁၉၆၂ မှ ယနေ့အထိ
၂-၃-၁၉၆၂ မှာ ဗခကနေဝင်းကစစ်အာဏာသိမ်းတယ်။ ၁၉၇၂ ဧပြီမှာ ဗခကနေဝင်းနဲ့ စစ်အရာရှိတွေ စစ်ယူနီဖေါင်းချွတ်ပြီး မဆလပါတီနာမည်နဲ့ဆက်အုပ်ချုပ်တယ်။ ၁၉၇၄ ကစပြီး တပါတီစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံအရ မဆလ ပါတီအစိုးရတွေက အုပ်ချုပ်တယ်။ ၁၉၈၇ မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ LDC အဆင့် နိုင်ငံ ဖြစ်လာတယ်။ ၁၉၈၈ မတ်လကစပြီး ကျောင်းသားတွေ စတင်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်တယ်။ မဆလပါတီ သမတ ၃ ဆက် ပြောင်းပြီး နောက်ဆုံး ၁၈-၉-၁၉၈၈ မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြန်တယ်။
၁၉၉ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေမယ့် NLD ကိုအာဏာလွှဲမပေးပဲ စစ်တပ်ကဆက်အုပ်ချုပ်တယ်။ ၂ဝ၁ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အတူ လူဟောင်းတွေကပဲ အရပ်ဝတ်နဲ့ဆက်အုပ်ချုပ်တယ်။ ၂ဝ၁၂ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါလာတယ်။ ၂ဝ၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD က အပြတ်အသတ်အနိုင်ရလိုက်တယ်။
ပုဂံအင်ပါယာကို မွန်ဂိုတွေက ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ ရှမ်းတွေကြီးစိုးခဲ့တဲ့ အင်းဝမှာ မြန်မာစာပေထွန်းကားခဲ့တယ်။ အနှစ် (၄ဝ) စစ်ကြောင့် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး ပျက်စီးရတယ်။ တောင်ငူအင်ပါယာဟာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးတဲ့မင်းနတ်ရွာစံပြီး ပျက်စီးသွားတယ်။ ကုန်ဘောင်မင်းဆက်ဟာ နန်တွင်းရေးနဲ့ ညံ့ဖျင်းတဲ့မင်းနဲ့ အပေါင်းပါတွေ အုပ်စိုးချိန်မှာ ကျွန်ဘဝ ရောက်ခဲ့ရတယ်။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံဟာ လွတ်လပ်ရေး ရပေမယ့် ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ နိုင်ငံရေးစနစ်ညံ့ဖျင်းကြောင့် အစစဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။
ဒီမှတ်တမ်းမှာ မပါတဲ့ တခြားဒေသဆိုင်ရာသမိုင်းတွေနဲ့ လူမျိုးအလိုက်သမိုင်းတွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ ဘယ်သမိုင်းစာအုပ်မဆို အပြောမလွတ်ပါ။ ဒီစာမှာ အများအားဖြင့် ကျောင်းသင်သမိုင်းမာတိကာနဲ့ အင်္ဂလိပ်လို ကိုးကားစရာတွေကနေ ယူထားတာသာဖြစ်ပါတယ်။
- Political history of Burma မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသမိုင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/political-history-of-burma.html
- Glimpses of History of Burma ဆရာဝန်ထံ ပေးစာတစောင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/glimpses-of-history-of-burma.html
- Burma–Thailand relations မြန်မာ-ထိုင်းဆက်ဆံရေးသမိုင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/burmesesiamese-wars.html
- Burmese–Siamese wars သမိုင်းထဲက မြန်မာ-ထိုင်းစစ်ပွဲများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/burmathailand-relations.html
- Sino-Burma border agreement တရုပ်-မြန်မာနယ်နိမိတ် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/sino-burma-border-agreement.html
- Stilwell Road စတီးဝဲလ်လမ်းမကြီး http://doctortintswe.blogspot.com/2015/03/stilwell-road.html
- Kokang background ကိုကန့်နယ်မြေသမိုင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/02/kokang-background.html
- Mongol and Myghal Emperors မွန်ဂို အင်ပါယာနဲ့ မူဂေါလ် အင်ပါယာ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/mongol-and-myghal-emperors.html
- Mongoloid မွန်ဂိုလွိုက် http://doctortintswe.blogspot.com/2014/10/mongoloid.html
- Sino-Burmese wars တရုပ်-မြန်မာစစ်ပွဲများ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/sino-burmese-wars.html
- Our Dynasties ကျွန်ုပ်တို့၏မင်းဆက်များ http://doctortintswe.blogspot.com/2016/06/our-dynasties.html
ရောင်းရန် နေရန် ပြင်ရန်မလုပ်၊
လူထုတ်တဲ့ အတားအဆီး ခါးစည်းခံ၊
အထီးကျန် သစ်ပင်၊ မြက်ပင်၊ ပေါင်းပင်၊ ရှင်သန်၊
တဲကုပ် ရွှေထုပ်မရှိ၊ လူသူမသိ ဝေဒနာရှိ၊
ခြံထဲရှိ မြက်ရှစ်ဆုပ်၊ အကျွန်ုပ့့်
ရှေးဟောင်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာ ဘီစီ ၁၁ဝဝဝ ကတည်းက ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျောက်ခေတ်မှာ ဥရောပ ကျောက်ခေတ်နဲ့ စင်ပြိုင်ရှိနေခဲ့တယ်။ ဘီစီ ၁၅ဝဝ လောက်မှာ ကြေးခေတ် ရှိခဲ့တယ်။ စပါးစိုက်ပျိုးလာကြတယ်။ မွေးမြူရေးလုပ်လာတြယ်။ ဘီစီ ၅ဝဝ လောက်မှာ သံခေတ်ရှိလာတယ်။
တိဘက်တို-ဗားမန်းအနွယ်လူမျိုးတွေဟာ ဘီစီ ၂ ရာစုမှာ ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းဒေသကို ယူနန်ဒေသကနေ ဝင်လာတယ်။ မြို့ပြနိုင်ငံတွေတည်ထောင်တယ်။ ပျူလူမျိုးဟာ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အစောဆုံးလူမျိုးလို့ ဆိုနိုင်တယ်။ တရုပ်၊ အိန္ဒိယ နိုင်ငံတွေနဲ့ ကူးသန်းဆက်ဆံကြတယ်။ ၄ ရာစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစတင်လာခဲ့တယ်။ ကနေ့ ပြည်မြို့တောင်ဖက်မှာ တည်ခဲ့တဲ့ သရေခေတ္တရာ မြို့ပြနိုင်ငံက အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ တရုပ်သမိုင်းအရ ပျူမြို့ပြနိုင်ငံပေါင်း ၁၈ ခုထိရှိတယ်။
၉ ရာစုနောက်ပိုင်းမှာ မြင်းစီးမြန်သူလို့တင်စားတဲ့ လူမျိုးတွေ မြောက်ဖက်ကနေဝင်လာတယ်။ ဗမာလို့ခေါ်တယ်။ ၉ ရာစု အစောပိုင်းကတည်းက ယူနန် နန်ဇောင် (နန်ချောင်) ဘုရင်တွေနဲ့ ပျူတွေစစ်ခင်းနေကြတယ်။ ၈၃၂ မှာ နန်ဇောင်းဘုရင်က ဟန်လင်းကြီးကို ဖျက်ဆီးလိုက်တယ်။ ပျူ ၃ဝဝဝ ယောက်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတယ်။ ပျူတချို့က ပုဂံဒေသမှာ အခြေချကြတယ်။ ပျူတွေဟာ ပုဂံသားတွေနဲ့သွေးနှောသွားတော့တယ်။ ၁၂ ရာစုအထိ ပျူစာပေ ကျန်နေသေးတယ်။ ပုဂံသားတွေဆိုတာ ဗမာတွေရော၊ ပျူတွေရော၊ မွန်တွေပါရောနှောနေတယ်။
၆ ရာစုကတည်းကစတယ်။ ထိုင်းမွန်ကနေလာတယ်။ ၉ ရာစုမှာ မွန်နိုင်ငံ ၂ ခု၊ ပဲခူးနဲ့ သထုံမှာတည်ထောင်တယ်။ ထေရဝါရဗုဒ္ဓဘာသာကို စတင်တဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်တယ်။ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ ကြွယ်ဝကြတယ်။ သထုံကို သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ရွှေနိုင်ငံတော်လို့ ခေါ်တွင်ခဲ့တယ်။
၂။ ပုဂံမင်းဆက် (၈၄၉-၁၂၉၇)
• ရခိုင် (၁၂၈၇-၁၇၈၅) လောင်းကြက်မင်းဆက် (ပုဂံမှကင်းလွတ်)၊ ၁၄၂၉ မှာ မြောက်ဦး (၁၇ ရာစုအထိ) တည်ထောင်ခြင်း၊ အရှေ့ဘင်္ဂလားသည် ၁၄၅၉-၁၆၆၆ အထိ မြောက်ဦးအောက်မှာရှိခဲ့သည်။
• မွန်-မြန်မာ နှစ် ၄ဝ စစ် (၁၃၈၅-၁၄၂၄) (ဒီအသုံးကို ချစ်ကြည်ရေးပျက်စေတယ်လို့ ထောက်ပြတာရှိတယ်။)
၄။ တောင်ငူမင်းဆက် (၁၅၁ဝ-၁၇၅၂)
၅။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက် (၁၇၅၂-၁၈၈၅)
၇။ လွတ်လပ်ရေးရခြင်း ၄-၁-၁၉၄၈၊
• ၁၉၄၈-၁၉၆၂ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်၊
• ၁၉၆၂-၁၉၈၈ တော်လှန်ရေးကောင်စီ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်းနှင့် မဆလ တပါတီစနစ်၊
• ၁၉၈၈-၂ဝ၁၁ စစ်အာဏာသိမ်းခြင်း (နဝတ + နအဖ)၊
• ၂ဝ၁၁ မှ ယနေ့ထိ။
မြန်မာနိုင်ငံ (၁၃ဝဝ-၁၈၈၅) ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအကျဉ်းချုပ် (ဒေါက်တာသန်းထွန်းရေးတဲ့ မြန်မာသစ်စာတမ်းက ကောက်နှုတ်ချက်)
• ၁၃ဝဝ ပုဂံနိုင်ငံပျက်
• ၁၃၁၂ ပင်းယမြို့တည်
• ၁၃၆၄ ရှမ်းဖျက်လို့ ပင်းယ၊ စစ်ကိုင်းပျက်
• ၁၃၆၅ အဝမြို့တည်
• ၁၃၇၄ ရခိုင်က မြန်မာမှာ နန်းလျာတောင်း
• ၁၄ဝ၄ ရခိုင်မင်းတွေ ရခိုင်ဘွဲ့အပြင် မဟာမေဒင်ဘွဲ့ကိုလဲယူ
• ၁၄၃၃ မြို့ဟောင်း (မြောက်ဦး) တည်
• ၁၄၃၇ သံတွဲ ရခိုင် လက်အောက်ခံစဖြစ်
• ၁၄၄၆ ရှမ်း သိုဟန်ဘွား တရုတ်မှာ အညံ့ခံ
• ၁၄၅၃ ရှင်ဥတ္တမကျော်၊ ရှင်သီလဝံသတို့ မွေးဖွား၊ မြန်မာစာပေကြီးပွား
• ၁၄၆ဝ မွန် ရှင်စောပု ရွှေတိဂုံစေတီရင်ပြင်တော်ကိုချဲ့
• ၁၄၅၇ မွန် ရာမာဓိပတိ (ဓမ္မစေတီ) မင်းက သာသနာသန့်စင်ရေးအတွက် သီရိလင်္ကာနဲ့ ဆက်သွယ်၊ ကလျာဏီကျောက်စာရေးထိုး
• ၁၅၂၃ ရှမ်း သိုဟန်ဘွား အဝ မင်းဖြစ်
• ၁၅၃၉ တပင်ရွှေထီး ဗဂိုးသိမ်း၊ ဗဂိုးမှာ နန်းသစ်ဆောက်
• ၁၅၄၁ တပင်ရွှေထီး မဒမကိုသိမ်း
• ၁၅၄၈ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား) ကို မြန်မာက ပထမအကြိမ် ဝန်းရံတိုက်ခိုက်
• ၁၅၅ဝ တပင်ရွှေထီးလုပ်ကြံခံရ၊ မွန်တွေက မြန်မာကို ဗဂိုးကနှင်
• ၁၅၅၅-၅၉ ဘုရင့်နောင်က အညာမြန်မာ၊ ရှင်းပြည်၊ မဏိပူရက လင်းဇင်းထိသိမ်း၊
• ၁၅၆၄ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား) ကို မြန်မာက ဒုတိယအကြိမ် ဝန်းရံ၊ မြို့ကိုသိမ်း၊ တနင်္သာရီ မြန်မာ လက်အောက်ခံဖြစ်လာ၊ ဗဂိုးကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး၊
• ၁၅၆၉ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား)ကို မြန်မာက တတိယအကြိမ် ဝန်းရံ၊
• ၁၅၈၇-၉၃ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား) ကို မြန်မာက စတုတ္တအကြိမ်ဝန်းရံ၊ ဘာမျှ အရာမရောက်
• ၁၆ဝဝ ရခိုင်၊ ယိုးဒယားပေါင်းပြီး ဗဂိုးကိုတိုက်၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးဆိုက်၊ နိုင်ငံ အစိတ်စိတ်ပြိုကွဲ၊ ဒီဗရစ်တို တညင်မှာအခိုင်အမာနေ
• ၁၆၁၇ မင်းခမောင်းက ရှင်မဖြူကျွန်းကိုသိမ်း၊ မာ့ဘ်နဲ့ ပုတကေ ပေါင်းပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ကိုတိုက်ခိုက်
• ၁၆၂၇ ဒတ်ခ်ျနဲ့ အင်္ဂလိပ် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတွေက မြန်မာမှာ ကုန်တိုက်ဖွင့်
• ၁၆၃၅ အဝကို မြို့တော်ပြောင်း
• ၁၆၅၂-၆၂ တရုတ်ဘက်က အညာမြန်မာနယ်တွေမှာ ဝင်ရောက်လုယက်
• ၁၆၇၇ ဒတ်ခ်ျနဲ့ အင်္ဂလိပ် အိန္ဒိယကုမ္ပဏီတိုက်ခွဲတွေ မြန်မာနိုင်ငံကရုပ်သိမ်း
• ၁၆၈၃ ဒတ်ခ်ျကုမ္ပဏီတိုက်ခွဲ ရခိုင်ကရုပ်သိမ်း
• ၁၆၈၈ ဘိတ် (မြိတ်) ကို ပြင်သစ်ကခေတ္တသိမ်းယူ၊ ပြင်သစ် အရှေ့အိန္ဒိယကုမ္ပဏီ တိုက်ခွဲ တညင်မှာဖွင့်
• ၁၇၂၁ ကက်သလစ် သာသနာပြု လုပ်ငန်းစ
• ၁၇၂၄-၅ဝ အညာမြန်မာဘက် မဏိပူရမှာ လုယက်
• ၁၇၂၅ မြန်မာက ဇင်းမယ်ကို လက်လွှတ်
• ၁၇၄ဝ ဗဂိုး၊ တညင်၊ မဒမ က မြန်မာတွေ ပြေးခဲ့ရ
• ၁၇၄၃ မြန်မာက တညင်ရ၊ ပြန်လက်လွတ်၊ မွန်က တညင်ရှိ အင်္ဂလိပ် အရှေ့အိန္ဒိယ ကုန်တိုက်တွေကို မီးတိုက်
• ၁၇၄၇ အုတ်ဖိုကွေ့ရှမ်းက မဒရာရှိ မွန်တွေနဲ့ ပူးပေါင်း
• ၁၇၅ဝ အဝမင်းက ယွန်နန်ကို အကူအညီတောင်း၊ မနုရင်း ဓမ္မသတ် ပြုစု
• ၁၇၅၁ ကျောက်ဆည်ကို မွန်တို့သိမ်း
• ၁၇၅၂ အဝကို မွန်တို့သိမ်း
• ၁၇၅၃ အဝက မွန်တို့ထွက်
• ၁၇၅၄ အဝကို မွန်တို့က အကြီးအကျယ် လာရောက်တိုက်ခိုက်တာကို အလောင်းမင်းတရားက တွန်းလှန်
• ၁၇၅၅ မွန်တို့က ဟံသာဝတီရောက်မင်းကို ရေမှာဖျောက်၊ အလောင်းမင်းတရား ပြည်၊ မြန်အောင်၊ ရန်ကုန်ကို သိမ်း၊ အင်္ဂလိပ်သင်္ဘောတွေကိုဖမ်း၊ ရန်ကုန်မှာ မီးလောင်၊ ကပ္ပတိန်ဗေကာ သံအဖြစ်နဲ့ အလောင်းမင်းတရားဆီလာ၊ မဏိပူရကို ပထမအကြိမ်ဖျက်ဆီး၊ ရှမ်းက အညံ့ခံ
• ၁၇၅၆-၅၇ ဗဂိုးကိုရံ၊ မွန်တို့ကို အပြီးတိုင်နိုင်
• ၁၇၅၈-၅၉ အလောင်းမင်းတရားက မဏိပူရကို အောင်နိုင်
• ၁၇၆ဝ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား) ကို မြန်မာက ပဉ္စမအကြိမ် ဝန်းရံ၊ တနင်္သာရီကို မြန်မာက သိမ်း၊ အဲဗ်စ်သံအဖွဲ့ရောက်၊ ရန်ကုန်မှာ အရှေ့အိန္ဒိယကုန်တိုက်ဖွင့်
• ၁၇၆၄ မဏိပူရကို တိုက်ခိုက်လုယက်
• ၁၇၆၇ အယုဒ္ဓယ (ယိုးဒယား) ကို မြန်မာက ဆဋ္ဌမအကြိမ် ဝန်းရံသိမ်းယူ
• ၁၇၆၅-၆၉ တရုတ် ကျူးကျော်စစ်
• ၁၇၇၃ မွန်တွေ ထိုင်းလင်းဘက်မှာ ခိုလှုံ
• ၁၇၆၈-၈၂ ထိုင်းလင်း (ယိုးဒယား) က မြန်မာတွေကို တိုက်ထုတ်
• ၁၇၈၃ အမရပူရကို မင်းနေပြည်လုပ်၊ ရန်ကုန်ကို မွန်တို့က ခေတ္တသိမ်း
• ၁၇၈၄-၈၅ ရခိုင်ကိုသိမ်း၊ အရပ်ရပ် ကျောက်စာတွေစု
• ၁၇၉၄ ရခိုင်မှာ သူပုန်ထ၊ မြန်မာက စစ်တကောင်းဘက်ကိုဝင်
• ၁၈၁၃ မဏိပူရကို ချီတက်၊ ဂျပ်ဆင် မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်
• ၁၈၁၄ မဒမမှာ မွန်တွေ ပုန်ကန် ထိုင်းလင်းဘက်ကို ဝင်ရောက် ခိုလှုံ
• ၁၈၁၆ အာသမ်ကို မြန်မာက တိုက်ခိုက်အောင်မြင်
• ၁၈၁၉ မြန်မာက မဏိပူရကိုသိမ်း၊ မြန်မာက အာသမ်ကိုသိမ်း
• ၁၈၂၃ အဝကို မင်းနေပြည်ပြန်လုပ်၊ ရှင်မဖြူ (ဆဟာဟပုရိ) ကျွန်းကို မြန်မာကသိမ်း
• ၁၈၂၄-၂၆ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ပထမစစ် ဖြစ်ပွား၊ ရခိုင်နဲ့ တနင်္သာရီကို အင်္ဂလိပ်ယူ
• ၁၈၅၂ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဒုတိယစစ် ဖြစ်ပွား၊ အကြေမြန်မာကို အင်္ဂလိပ်သိမ်း
• ၁၈၅၇ မန္တလေးမြို့ စတည်
• ၁၈၈၅ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ တတိယစစ်ဖြစ်ပွား၊ အညာမြန်မာကိုပါ အင်္ဂလိပ်သိမ်း။
ဒီစာဟာ လူမျိုးတွေအကြောင်းမဟုတ်ပါ။ အထင်ကရအဖြစ်အပျက်တွေသာဖြစ်ပါတယ်။ တခြား တိုင်းရင်းသာများမှာလည်း အုပ်ချုပ်ရေးတွေ စင်ပြိုင်ရှိနေခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ ဗြိသိသျှအစိုးရကနေ ကရင်နီကို မင်းတုန်းမင်းက ၁၈၇၅ မှာပေးခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ဆက်ပြီးအသိအမှတ်ပြုတယ်။ တခြားလူမျိုးစုတွေမှာလည်း ကိုယ်ပိုင်သမိုင်းတွေရှိကြမယ်။ သမိုင်းဆိုတာ ထင်ရှားတာတွေကိုသာ အဓိကထားနိုင်တယ်။ မင်းတွေအကြောင်းခံရေးသားတဲ့ဘာသာရပ်ဖြစ်လို့ ရာဇဝင်လို့ ခေါ်ခဲ့တယ်။ နောက်မှသာ သမိုင်းလို့သုံးလာတယ်။
ဆရာရှင့် ကျေးဇူးပြုပြီး သမီးရောဂါကိုဖြေပေးပါရှင်။ ဒီလို ရေအိတ်လေးကနေ စဖြစ်ပြီး အနားတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဒီနေရာတွေပဲ ကောင်းလိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်ပါပဲ။ ကုနေတာလည်းနှစ်ပေါင်းကြာလှပြီ။ ခုသမီး အသက် ၃၅နှစ်ရှိပါပြီ။ အသက် ၁၅ နှစ်ကတည်းက ဖြစ်နေတာပါ။ ခြေနှစ်ဖက်စလုံး ဒီနေရာတွေ ပဲ ထပ်ထပ်ဖြစ်နေတာပါရှင်။ သမီးရောဂါက မပျောက်ကင်းနိုင်တော့ဖူးလား။ ကြာလာတော့လည်း လူတောမတိုးရဲတော့ဖူး။ နည်းလမ်းလေးတွေ ပြောပြပေးပါနော်။ ငွေကြေးကလည်း အဆင်မပြေတော့ ရှိတဲ့ခါလေးဆေးခန်းပြလိုက် မရှိတဲ့ခါလေး သောက်ဆေးနဲ့ တည်းထားလိုက်ပေါ့။
ခြေထောက်မှာ အနာတွေပေါက်ရင် (၃) လထက်ပိုမကြာပဲပျောက်တယ်။ (၁၂) လအထိမပျောက်သေးတာကို Chronic leg ulcer နာတာရှည်ခြေထောက်နာလို့သတ်မှတ်တယ်။ ဆေးလိပ်သောက်တာ၊ လူဝတာနဲ့ ဆီးချိုတွေကနေ ပိုဆိုးစေတယ်။ အသက် ၆ဝ ကျော်သူတွေထဲမှာ ဝ့၆% ကနေ ၃% အထိဖြစ်တယ်။
ဆောရီး။ အင်္ဂလိပ်စာလုံးတွေကို ကျော်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဗေဒမှာ Ulcers အနာဆိုတာ အရေပြားတခုလုံးနက်တယ်။ ပျောက်ဘို့ကြာတယ်။ အရေပြား Epidermis လွှာတခုလုံးပျက်စီးနေမယ်။ Dermis တစိတ်တပိုင်းကျန်နိုင်တယ်။ အောက်အဆီလွှာသာထိ ရောက်မယ်။ အသက်ကြီးလေပျောက်ခဲလေဖြစ်တယ်။ နာမယ်။ အသားနုတက်လိုက် ပြန်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်မယ်။ အနံ့ထွက်မယ်။ လူမှုရေးနဲ့ စိတ်ပိုင်းထိခိုက်လာမယ်။
ဆေးတွေကို မြန်မာပြည်မှာ လက်လှမ်းမီမယ်တော့မထင်ပါ။ ဆေးတွေကလည်း ယူအက်စ်အေမှာ ဆေးသုတေသနတွေ လုပ်နေတာမျိုးဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်မှာ သုတေသနပေါင်းစုံရှိလာစေချင်တယ်။ တိုင်ပြည်ကုံလုံကြွယ်ဝမှာသာ အဲတာမျိုးက တတ်နိုင်တယ်။ မြန်မာပြည်ကြီး ချမ်းသာပါစေ။ ဝေဒနာသည်တွေ ကျန်းမာပါစေ။
ဘယ်အရေးမှာဖြစ်ဖြစ် လူတွေကမတူကြတာ ကမ္ဘာ့နိယာမပါ။ ဗမာ့နိယာမလို့ပြောရမှာတခုကို ကနေ့ပဲ သဘောပေါက်လာတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ကျေးဇူး။
ကျွန်တော်က (၁) ဆဲရေးတိုင်းထွာသူ၊ (၂) ဘာသာရေးအစွန်းရေးသားသူနဲ့ (၃) မလုပ်ပါရန်နဲ့ မေးနည်းစည်းကမ်းကို ပြောထားပေမယ့် ထပ်ထပ်လုပ်သူမျိုးတွေကို ဘလော့ပါတယ်။
ကနေ့ အသည်းရောင်စီပိုးရှိသူတဦးက စနစ်တကျမေးလာလို့ အဖြေစာပို့မယ်လုပ်မှ သူ့ကို ကျွန်တော်ကဘလော့ထားတာ သိရတယ်။ ဘလော့ထားသူကနေရေးလာရင် Facebook User လို့တွေ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရေးတဲ့ သူ့ရောဂါစာကို သူ ဖတ်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါ။ စိတ်မကောင်းပါ။ အဆင်ပြေသူတွေကနေ ထပ်ဆင့်တင်ပေးစေလိုပါတယ်။
နောက်တခုက နိုင်ငံရေးမှာ လိုင်းချင်းမတူပေမယ့် လူချင်းသိလို့အားနာတာနဲ့ ဘလော့မလုပ်ပဲထားသူတွေရှိပါတယ်။ သူတို့ရေးတာတွေ၊ ကူးယူပြီးပြန်တင်ကြတာတွေကိုပါ နေ့တိုင်းတွေ့နေရတယ်။ NLD လုပ်သမျှအပြစ်ချကြတယ်။ အဲတာမှာ ဆဲတာထက်ဆိုးတာမျိုးတွေ့တတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့ကိုးကွယ်လောက်တဲ့ မဆလ၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ဝေဘန်ပြီး ရေးသား၊ ပြောဟောခဲ့တာ နှစ်အစိတ်ကျော်ပါပြီ။
ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က မုံရွာမှာ အိမ်နီးချင်းတွေ နေ့တိုင်းလိုလို တအိမ်နဲ့တအိမ် ရန်ဖြစ်ကြလေ့ရှိတယ်။ ဆဲနည်းပေါင်းက စုံနေတာပဲ။ ဆေးကျောင်းသွားတက်ရမှ နားသက်သာသွားတယ်။ ဆဲနည်းအစုံကိုသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကရော လက်ကပါ မဆဲပါ။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့သူတွေက NLD ဆို ဆီလိုအပေါက်ရှာရေးကြတယ်။ ကပ်သီးကပ်သပ်ရေးကြတယ်။ ခနိုးခနဲ့ရေးကြတယ်။ သူတို့က ဆရာဝန်တွေနဲ့ စာနယ်ဇင်းလောကကလူတွေပါ။ ဒီစာတွေ့ပြီး သူတိုကနေ ကျွန်တော့်ကို ဘလော့လုပ်ကောင်းပါရဲ့။
ကနေ့ရလိုက်တဲ့ သင်္ခန်းစာက ဘလော့လုပ်ခြင်းရဲ့ အဆိုးနဲ့အကောင်း။ ဘလော့မလုပ်ခြင်းရဲ့ အကောင်းနဲ့အဆိုး။